porn စွဲကနေဆုတ်ခွာတူသောအဘယ်အရာကိုကြည့်သလဲ, - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
ဤတွင်“ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုမှထွက်ခွာသွားခြင်းနှင့်မည်သို့တူသနည်း” ဟူသောမေးခွန်း၏အဖြေကိုတွေ့နိုင်သည်။ ကျနော်တို့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖြတ်သန်းသွားယောက်ျားတွေထံမှပံ့ပိုးမှုများနှင့် Gabe Deem ထံမှအချို့သောအကြံအစည်ရှိသည်။
အစီရင်ခံစာများပါသော PDF ဖိုင်ဆုတ်ခွာလက္ခဏာများ"
စာမျက်နှာ porn အသုံးပြုသူများအတွက်ရုပ်သိမ်းရေးလက္ခဏာတွေအစီရင်ခံ 14 လေ့လာမှုများ.
Nofap.com ပေါ် Thread - ဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာများစာရင်းကိုလုပ်ကြပါစို့
2020 ၏အဖြစ်, 60 ကျော်လေ့လာမှုများ porn ကိုအသုံးပြုခြင်း (သည်းခံစိတ်) ၏တင်းမာမှုနှင့်ကိုက်ညီတွေ့ရှိချက်, porn ဖို့လေ့နှင့်ပင်ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေသတင်းပို့ (စွဲလမ်းနှင့်ဆက်စပ်အားလုံးလက္ခဏာနှင့်ရောဂါလက္ခဏာများ) ။
ဤပြန်လည်ဖွင့်သည့်ဇာတ်လမ်းမှကောက်နုတ်ချက် -9များအတွက် 90 (ငါ့ကို9ရက်ပေါင်းရောက်ရှိရန်ကူညီ 90 စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ)
အကြွင်းမဲ့အာဏာအလှအပ, နားလည်မှုများနှင့်ကနဦးပြန်လည်ထူထောင်ရေးတစ်လျှောက်လုံးငြိမ်သက်ခြင်း၏အချိန်လေးရှိလိမ့်မည်။ လည်းပြင်းထန်သောစိတ်ကျရောဂါ, စိုးရိမ်စိတ်, ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်၏အချိန်လေးဖြစ်နှင့်စွန့်လွှတ်ပါလိမ့်မယ်။ ဤအအချိန်လေးကနေတဆင့်အောင်များအတွက် key ကိုခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုယာယီဖြစ်ကြပြီး, ဤစိတ်ခံစားမှုမျှဘယ်လောက်ပဲပြင်းထန်, လွန်သွားလိမ့်မည်ဟုကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။
သငျသညျအခြေခံအားဖြင့်ပျော်ရွှင်မှုနှင့်ချစ်ခြင်းကိုခံထိုက်သောသူတစ် ဦး ကောင်းတစ် ဦး ဖြစ်ကြောင်းသတိရပါ။ ဤစိတ်ခံစားမှုများကိုခံစားရရန်အဆင်ပြေပြီး၎င်းသည်ဤလုပ်ငန်းစဉ်၏ပုံမှန်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်အမှန်တကယ်အချိန်ကြာမြင့်စွာဘာမှ "ခံစားခဲ့ရ" ကြပြီမဟုတ်။ သင့်ကိုယ်သင်ဤစိတ်ခံစားမှုများကိုစူးစမ်းလေ့လာပါ။ ဖိနှိပ်ဖို့မကြိုးစားပါ။ သင်အမှန်တကယ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ပျော်ရွှင်ခြင်းနှင့်အမှန်ထိုက်သည်။
မင်းခေါင်းထဲမှာမရှည်ပါနဲ့ ကြာရှည်သောကာလအတွက်မည်သည့်အနုတ်လက္ခဏာခံစားချက်ကိုမှမမြဲပါနှင့်။ တွေ့ကြုံခံစားပြီးပြည့်ပြည့်စုံစုံခံစားပါ၊ ဖြစ်နိုင်သည့်အခါတိုင်းအာရုံစူးစိုက်နေပါ။ အတိတ်ကာလကိုစိတ်စွဲလမ်းမထားပါနဲ့။
ညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများကိုပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုရပ်တန့်လိုက်သောအခါသူတို့၏ရုပ်သိမ်းမှုလက္ခဏာများပြင်းထန်မှုကြောင့်အလွန်တုန်လှုပ်သွားသည်။ ဤသည်ဖြစ်နိုင်သည်မှာအင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏ရိုးရိုးသားသား - ကောင်းမြတ်ခြင်း၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်သည့်ကျယ်ပြန့်သောမျက်စိကန်းသောနေရာတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်သည်။ ရောဂါလက္ခဏာများသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမျှသာမဟုတ်ပါ။ သူတို့သည်သင်၏စိတ်နှင့်ကမ္ဘာ့အမြင်ကို (မှောင်မိုက်နေသည့်) အပေါ်ယူနိုင်သည်။ သို့သော်ဤတူညီသောလူအများစုကအစီရင်ခံခဲ့သည် ကြီးမားတဲ့တိုးတက်မှု ခဏညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲဖြစ်ခြင်းပြီးနောက်။
စိတ်ကိုသတိရပါ ဦး နှောက်ရဲ့ဆုလာဘ်စနစ်နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုဆားကစ် ပိုပြီး dysregulated ကြီးထွား, ဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာတွေပိုပြီးသိသာဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်၊ အကယ်လို့သင်သည်အစွန်းရောက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုခဲ့ပါကပိုမိုပြင်းထန်သောလက္ခဏာများကိုသတိပြုမိလိမ့်မည်။ သတင်းကောင်းကသူတို့ဖြတ်သွားတာပဲ။ သို့သော်သင်၏ ဦး နှောက်သည်ပုံမှန်အာရုံခံနိုင်စွမ်းသို့ပြန်မရောက်မီသင်ကိုယ်တိုင်ပြင်းထန်သောနှိုးဆွမှုဖြင့်“ ဆေးဝါးများ” ကိုဆက်လက်ထားရှိပါက၊ Groundhog Day ကို မြင်ကွင်း။
အခြားသူများကသူတို့၏ဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာများနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းပို့ခြင်းကိုကြည့်ခြင်းကနှစ်သိမ့်မှုဖြစ်စေနိုင်သည်။ သို့မှသာသင်ကြုံတွေ့နေရသောအရာသည်ပုံမှန်ဖြစ်သည်ကိုသင်သိသည်။ အချို့သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုသူများသည်ဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာများကိုအနည်းငယ်ဖော်ပြကြပြီး၊ အောက်ဖော်ပြပါသုံးစွဲသူအစီရင်ခံစာများကိုဖော်ပြထားသည်။ နှိုင်းယှဉ်မှုအနေဖြင့်အရက်၊ ကိုကင်းနှင့်ဘိန်းဖြူသုံးစွဲသူများကြုံတွေ့နေရသောရောဂါလက္ခဏာများကိုစုဆောင်းပေးသောဤစာမျက်နှာအောက်ရှိ link ကိုလည်းကြည့်ပါ။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဆေးစွဲမှုအားလုံးဟာ ဦး နှောက်ရဲ့တိကျတဲ့ဒေသတွေကိုအကျိုးသက်ရောက်စေတဲ့ neurochemical နှင့်ဆယ်လူလာအပြောင်းအလဲများကိုဝေမျှသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤသည်စွဲလမ်းမှုအားလုံးသည်တူညီသောပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟုမဆိုလိုပါ။ အရက်သို့မဟုတ်စွဲစေသည့်မူးယစ်ဆေးဝါးများသည်အပိုဆောင်း messenger စနစ်များကိုပျက်စီးစေနိုင်သည် (ဥပမာ - opiid အသုံးပြုမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာ၏ opioid receptors များကိုလျော့နည်းစေသည်) လက်ရှိသိပ္ပံမှထုတ်ယူခြင်းသည်အစပြုကြောင်းတွေ့ရှိရသည် neurochemical ပွောငျးလဲ၏အဆငျ့ဆငျ့, ပါဝင်သည်ရသော:
opioids နှင့်နဲ့အတူ Endorphins အတွက်ထပ်မံကျဆင်း
drop-ချွတ် anti-စိုးရိမ်စိတ် neurotransmitter ဖြစ်သည့်ဂါဘမြို့သားအတွက်
ဦးနှောက်ကဖိစီးမှုဟော်မုန်းမြင့်တက် CRF နှင့် norepinephrine
dopamine ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်နှင့်သင့်အပျော်အပါးတုံ့ပြန်မှု blunts ရာသို့ခြီးမွှောကျ dynorphin
တစ်ပတ် ပြီးနောက် ဖြတ် အကျိုးကိုစင်တာပင်ပေါက် သုံးစွဲဖို့မတရားသောနှင့်အတူပတျသကျရာသစ်ကိုအာရုံကြောဆဲလ်အကိုင်းအခက်,
အကယ်၍ သင့်တွင်ဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာများရှိပါကသင်သည်သင့်တွင်စွဲလမ်းမှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည် (သို့မဟုတ်ရောဂါတစ်ခုခုကိုဖွံ့ဖြိုးရန်သင်အသင့်ရှိနေသည်) ။ သို့သော်၊ အချို့သောယောက်ျားများတွင်ဆေးစွဲခြင်းမရှိဘဲဆေးစွဲခြင်းများရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ဆေးစွဲသူများသည်ဆေးစွဲခြင်း၏လက္ခဏာများကိုမစစ်ဆေးပါ။ ဥပမာအားကြည့်ပါ။ သငျသညျတခုစွဲဖူးပါသလား?
ကြွက်သားတွေ, အဆစ်, သွားတွေ, မေးရိုး, လိင်အင်္ဂါနှင့်ခန္ဓာကိုယ်အခြားအစိတ်အပိုင်းများအတွက်ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့်ဝဒေနာခြင်းနှင့်တောင့်တင်း
အာရုံစိုက် / အာရုံစူးစိုက်မှု / အာရုံစူးစိုက်မှု (ဦးနှောက်မြူ) ၏မရှိခြင်း
အမျက်ဒေါသ၏စိတ်ပျက်, ယားယံခြင်း, မျက်ဒေါသ, Short-စနစ်ဖြစ်ပြီးနှင့်အခြားပုံစံများ
အနာရောဂါ၏တုပ်ကွေး, ပျို့, အဖျားနှင့်အခြားပုံစံများ
Little ကသို့မဟုတ်လုံးဝမလိင်စိတ်, (ကိုထင်ရှားစွာပြမှရက်ပေါင်းယူနိုင်သလား flatline နှင့် အချိန်ကြာမြင့်စွာကြာရှည်)
ညစ်ညမ်း flashbacks နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအိပ်မက်
Horniness, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမတရားသော, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေးနဲ့ porn ကိုသုံးပါနှင့် / သို့မဟုတ် masturbate ဖို့တိုကျတှနျးထား
အင်တာနက်စွဲသုတေသန အင်တာနက်စွဲသူများသည် ၀ က်ဘ်အသုံးပြုခြင်းကိုရပ်တန့်လိုက်သောအခါမူးယစ်ဆေးဝါးမှထွက်လာသည့်လူများနည်းတူအင်တာနက်စွဲသူများသည်အအေးမိရောဂါခံစားရနိုင်သည်ဟုအစီရင်ခံခဲ့သည်။
Swansea နှင့် Milan တက္ကသိုလ်များမှလေ့လာမှုတစ်ခုအရလူငယ်များသည်ကွန်ယက်ကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုခြင်းအားရပ်တန့်လိုက်သောအခါ“ မကောင်းသောစိတ်ဓာတ်များ” ရှိကြသည်။ ... စွဲသူများ၏ဝဘ်အသုံးပြုမှုမှာမတူညီသော်လည်းသို့သော်အွန်လိုင်းမှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုလောင်းကစားခြင်းနှင့်ရယူခြင်းသည်သူတို့အတွက်ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ ... သိပ္ပံပညာရှင်များက၎င်းသည်ဤမနှစ်မြို့ဖွယ်ခံစားချက်များကိုဖယ်ရှားရန်အင်တာနက်သို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
ငါဘုရားကိုသူကပြောတယ်ဘုရားများကဲ့သို့ခံစားခဲ့ရပထမဦးစွာ 12 ရက်ပေါင်း
နေ့ရက်များ 16-25 တော်တော်လျောက်ပတ်သော flatline အလွန်ပင်ပန်း, ဝမ်းနည်းဖွယ်, etc ပေမယ့်ရမ္မက်ကြီးမားခဲ့ကြပါတယ်။
နေ့ ၂၆-၆၀ တွင်များသောအားဖြင့်အဆင်ပြေသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်တစ်ခုခုမမှန်ကန်တဲ့၊ ငါ့ ဦး ခေါင်းနောက်ဖက်တွင်တစ်ခုခုပြောင်းလဲနေသည်ဟုခံစားမိသည်။
နေ့များ ၆၁-၇၆ သန့်ရှင်းသောရှုပ်ထွေးမှုကျွန်ုပ်သည်ပြင်းထန်သောဆေးကုသမှုခံယူခြင်းနှင့်ပြားချပ်ချပ်ရောဂါလက္ခဏာများအပါအဝင်စိတ်ကျရောဂါ၊ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်နှင့်အမှန်တကယ်မှားယွင်းနေသည့်အရာနှင့်မခံစားရပါ။
(၈၀) ရက်တော်တော်လေးချောမွေ့တဲ့ရွက်လွှင့်တာ၊ (၁၈) နှစ်များအတွင်းဤအရာကိုမခံစားရပါ။ (အရင်က NoFap ကိုကျွန်တော်စမ်းကြည့်ခဲ့ဖူးတယ်၊ ဒါပေမယ့် porn ကိုကြည့်ပြီးဘာအကျိုးကျေးဇူးမှမရခဲ့ဘူး)
အချို့သောယောက်ျားများသည်ဆုတ်ခွာခြင်းလက္ခဏာများကိုလနှင့်ချီပြီးကြုံတွေ့ရသည်။ Post-စူးရှဆုတ်ခွာ syndrome ရောဂါ (ယက်) porn စွဲနှင့်အတူပေါ်ပေါက်ပါသလား?
ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေခံဗွီဒီယိုသည်အဘယ်ကြောင့်ဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာများဖြစ်ပွားရကြောင်းကိုလည်းရှင်းပြထားသည်။ Porn on Brain: Internet Porn သည် Brain အပေါ်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သည်။
ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် ငါဟာအငြိုးကြီးတဲ့ညစ်ညမ်းတဲ့စွဲလမ်းသူမဟုတ်ဘူးလို့အရင်ဆုံးထင်ခဲ့တယ် ဒါပေမဲ့ woow
၁- ပထမသုံးရက်လုံးတွင်အိပ်မပျော်နိုင်ခြင်း။ (မျက်လုံးနီခြင်းနှင့်တစ်နေ့လုံးမြည်ခြင်း၊ OMG) ။
တစ် ဦး တည်းနေဖို့ 5- လို။
7- တုပ်ကွေးရောဂါလက္ခဏာများသည်တစ်လလုံးဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲ (နှာရည်ယိုခြင်း၊ နှာခေါင်းပိတ်ဆို့ခြင်း၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ ချမ်းတုန်ခြင်း၊ အအေးမိခြင်း)
8- ဦး ခေါင်းထုံ
၉- ဦး နှောက်အတွင်းရှိထူးဆန်းသောခံစားမှု (နာကျင်မှုမဟုတ်ပါသို့သော်တစ်ခုခုသည်ဖြည်းဖြည်းချင်းရွေ့လျားနေသည်သို့မဟုတ်သေးငယ်လာသည်ကဲ့သို့) LINK
ဤတွင်ကျွန်ုပ်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမည့်အရာမှာနာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ မအိပ်နိုင်ခြင်း (အိပ်ရေးအထောက်အကူပြုပစ္စည်းများပင်လျှင်များစွာမကူညီ)၊ တုန်လှုပ်ခြင်း၊ တုန်လှုပ်ခြင်း၊
ကြက်ဆင်အအေးမိခြင်းကိုရပ်တန့်လိုက်သည့်အခါမည်သူ့ကိုမှဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာများရခဲ့သလဲ ငါရပ်တန့်ပြီးကတည်းကငါ့ကိုတော်တော်ရှုပ်ထွေးတယ်, သူကပြောတယ်ကတည်းကစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်စိတ်ကျရောဂါနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်ခဲ့ရသည်။ ငါ ၁၁ ရက်ကြာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကားချပ်ဝတ်ဆင်ခဲ့ပြီး ၁၄-၁၅ အရွယ်လောက်ကတည်းကဒီဟာမရှိဘဲငါအရှည်ဆုံးပဲ။ ငါစောင့်ကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းချက်ရှိသည်ပါဘူးငါရပ်တန့်ကတည်းကကတည်းကကိုယ့်ကိုကိုယ်နှင့်တူခံစားမိပါဘူး။
ကျွန်ုပ်သည်ပြင်းထန်သောပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ စိတ်နာခြင်း၊ စိုးရိမ်ခြင်းစသည်တို့ရှိသည်။ စသည်တို့သည်ဘိန်းမှထွက်ခွာသွားသည်ဟုခံစားရသည်။ ဤသည် shit ဒါဆိုးညစ်ယုတ်မာတဲ့နှင့်အစွမ်းထက်သည်။ အလေးအနက်ထား, ကအန္တရာယ်မကင်းဟုပြောသူမည်သူမဆို fuck ဆိုတဲ့။
၃ ပတ်အတွင်း။ ပိုကောင်းအောင်သွားမယ့်အချိန်ကိုမသိဘူး။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံကိုစွန့်လွှတ်ရန်ကျွန်ုပ်၏ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအတွင်းကျွန်ုပ်အားရုပ်သိမ်းခြင်းသည်အလွန်ပြင်းထန်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သူတို့ဟာအကြမ်းဖျင်း ၂-၃ ပတ်လောက်ကြာပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Ive သည်အခြားထပ်မံဖြစ်ပွားသောအရာတိုင်းသည်အရက်လည်း Peeking နှင့်လိုက်ဖမ်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ အရက်ကိုရှောင်ပါ
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့် ပတ်သက်၍ အဆက်မပြတ်အိပ်မက်ဆိုးများရှိပါသလား။
ငါမင်းနဲ့ရှိနေမယ်! မကြာသေးခင်ကပဲစိတ်ပူပန်မှုနှင့်ခေါင်းကိုက်ခြင်းများကကျွန်တော့်ကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်ခဲ့သည်။ မကြာခင်ပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါတစ်ယောက်တည်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ မင်းအတွက်လမ်းပျောက်သွားရင်ငါသိချင်တယ်။ အားလုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်!
ကျွန်ုပ်၏နောက်ဆုံးကြိုးပမ်းမှုမှာယနေ့ ၅ ပတ်ကြာသည်။ ရက်သတ္တပတ် ၂ မှ ၄ အထိ။ ငါ့ကိုကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုမေးခွန်းထုတ်စေပေမယ့်ကျေးဇူးတင်စရာကပိုကောင်းလာတယ်။
ထုတ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ၁၅ ရက်ပတ်လုံးအရက်သောက်ခြင်းကိုရှောင်ရှားသည့်အချိန်ကိုကြည့်ရှုရန်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျအိပ်မက်မက်သည်။
flatlining နှင့် anhedonia အကြားတူညီမှုများစွာရှိသည် (ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်နည်းဖြင့်မျှကျွမ်းကျင်မှုမရှိပါ) ။ သင်တစ်ကြိမ်တည်းစစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်
သငျသညျ nofap hehe အပေါ်အများကြီးအကြောင်းကြား။ ငါနင့်နာရီကိုနီးကပ်စွာထားနိုင်သကဲ့သို့သင်, порноကနေရုပ်သိမ်းခြင်းကိုကျိန်းသေ။ ဥပမာ - ၇-၁၁ ရက်။ စိတ်ကျရောဂါ
သူတို့ဒါအလွန်အစစ်အမှန်ဖြစ်ကြသည်။ ငါရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ဖြတ်သန်းသွားလေ၏ ခေါင်းကိုက်ခြင်းဝေးဝေးနေဖြင့် strangest အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်
ငါတကယ်ရှိတယ်ဆိုတာငါသိတယ်ဒါပေမယ့်ငါမှာအဲဒီလိုမရှိခဲ့ဘူး၊ ငါလည်းမသိလို့ငါမသောက်ချင်တဲ့ငါသောက်စရာတွေနည်းနည်းပဲရှိတာပေါ့။ လူတစ်ယောက်နဲ့အတူတူ။
ထုတ်ယူထုတ်ကုန်တွေကလည်းငါ့ကိုပါ။ ငါ့ခန္ဓာကိုယ်က dopamine ကိုအော်ဟစ်နေတယ်။ ငါဖြစ်သောကြောင့်တပ်မက်ခြင်း၏အာရုံစိုက်ဖို့ခဲယဉ်းအချိန်ရှိသည်။ ငါလည်းအရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားမိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါထင်တယ်၊ ငါမလိုချင်တဲ့အချိန်မှာရှုပ်ထွေးနေမှာကိုငါကြောက်တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကနေ့ဟာငါ့အတွက်အမြဲတမ်းကြီးမားတဲ့အရာဖြစ်ခဲ့တယ်။ ငါမကြာသေးခင်ကပြန်ဖြစ်သွားပြီ၊ ဒါကြောင့်မုန်တိုင်းမကြာခင်ငါ့ကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်တော့မယ်ဆိုတာကိုငါစောင့်နေတယ်။ ဒါပေမယ့်အဲဒီမှာဝင်ပါ။ သင် Flatline အပေါင်းတို့နှင့်ပစ္စည်းပစ္စယအနည်းငယ်အဘို့အသွားရသောအချိန်ရှိသည်ဆိုပါစို့။ ဆက်လုပ်ပါ
ဟုတ်ပါတယ်ဆုတ်ခွာမြည်းအတွက်နာကျင်မှုရှိနိုင်ပါသည်။ ငါသည်သင်တို့ကိုစာရင်းဝင်အဖြစ်ကမကောင်းတဲ့ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါပေမယ့်ငါအားလုံးသူတို့ကိုအတူတူပင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပါ ဦး ခေါင်းကိုဆက်ထားပါ။ သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးငါလုပ်ခဲ့တယ်။
ပထမဦးဆုံးအရက်အနည်းငယ်ခွောကျတတျသောနှင့်တန်းတူအတိုင်းအတာအတွက်ပါးခဲ့သည်။ ငါမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ခံစားခဲ့ရပထမရက်အနည်းငယ်။ အကြှနျုပျ၏လိင် drive ကို All-စားသုံးခဲ့ပါတယ်။ ငါတစ်နေ့အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှဒုတိယ fucking စဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။ ကြှနျတေျာ့စိတျထဲကအစစ်အမှန်မိန်းကလေးငယ်များရန်၎င်း၏အာရုံကိုလှည့်နိုင်အောင်က၎င်း၏မတရားသောအစာကျွေးရန်မညစ်ညမ်းခဲ့ရသည်။ ငါစိတ်ပိုင်းငါမြင်တိုင်းမိန်းကလေးသုတ်သင်နှင့်ငါ၏ဦးခေါင်း၌တစ်ဦးညစ်ညမ်းမြင်ကွင်းတစ်ခု Re-ပြဋ္ဌာန်းလိမ့်မယ်။ ငါဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလုပ်နေတာငါ့အစားပွဲပေါ်မှာထိုင်နေသည်နေတုန်းခက်ခဲစိုက်ထူကျောက်တယ်။ ငါလမ်းလျှောက် fuck ဆိုတဲ့စက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
3-4 ရက်ပေါင်းပြီးနောက်, ငါပျက်ကျသွားသည်။ ခက်။ ကျွန်မအလုပ်မှာပြင်းထန်စိုးရိမ်ပူပန်ရတဲ့စတင်ခဲ့သည်။ ငါတိုက်ခိုက်မှုစိုးရိမ်ထိတ်လန်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါ profusely ချွေးလိမ့်မယ်။ ကျွန်မထိုင်တောင်စဉ်ခေါင်းမူးခြင်းနှင့်မောရလိမ့်မယ်။ ငါပုံမှန်ထော့နဲ့ခေါင်းကိုက်ရလိမ့်မယ်။ ငါခါနီးပျက်စီးခြင်း၏ဤစဉ်ဆက်မပြတ်အသိခံစားရတယ်။ အကြှနျုပျ၏လိင် drive ကိုလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားသည်။ ငါသူတော်ကောင်းကဒီညစ်ညမ်းဆုတ်ခွာခဲ့ယုံကြည်နိုင်ဘူး။ ငါသေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ထင်ခဲ့တယ်။
ဒါဟာလပေါင်းများစွာကြာခဲ့သည်။ ငါပြုသမျှသောအရာကို porn နားလည်လာတယ်။ ကျွန်မဦးနှောက် neurochemistry အကြောင်းကို ပို. ပို. ဖတ်ပါကဖြည်းဖြည်းချင်းငါပြုသမျှမည်မျှပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုငါ့ကိုသဘောပေါက်။ ငါရွားလှခံစားခဲ့ရပေမယ့်အခုကထဲကအကပ်ရန်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဒီအချိန်အတောအတွင်းမှာကျွန်တော်အထူးမှတ်မိလောက်အောင်ထူးခြားတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုရှိခဲ့တယ်။ အဲဒါကိုဖော်ပြရကျိုးနပ်ပါတယ်။ ငါအတော်လေးစိတ်ဆင်းရဲပေမယ့်အလုပ်လုပ်တဲ့ခံစား, ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအပေါ်အတော်လေးအစောပိုင်းအဆင့်၌ရှိ၏။ ကော်ဖီဆိုင်တစ်ခုမှာကျွန်တော်ဟာရက်သတ္တပတ်များစွာမတွက်ဆနိုင်တဲ့ coding ပြonနာကိုလုပ်ဆောင်နေခဲ့ပါတယ်။ အသေးစိတ်များများမပြောဘဲဤပြsolvingနာကိုဖြေရှင်းရန်ကျွန်ုပ်အတွက်ပိုက်ဆံအများကြီးရနိုင်သည်။ ရုတ်တရက်ယူရီကာအခိုက်အတန့်၌, ငါကထွက်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ငါဒီစိတ်လှုပ်ရှားမှု၏မြင့်တက်ခံစားရတယ်။ ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းဆိုသလိုကျွန်တော့် ဦး နှောက်ထဲမှာလောင်ကျွမ်းမှုတစ်စုံတစ်ရာရှိနေတယ်။ ငါချက်ချင်းစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်ဤပြင်းထန်သောထိတ်လန့်ခံစားမှုနှင့်အတူလွှမ်းမိုးခဲ့သည်။ ငါချွေးထွက်လာတယ်ငါ့နှလုံးတုန်နေတယ်။
ငါသည်ငါ့ shit ထုပ်ပိုးအိမ်ပြန်ပွေးနှင့်တစ်နေ့လုံး၏ကျန်များအတွက်ငါ့အိပ်ရာပေါ်ကောက်။ ကျွန်တော့် ဦး နှောက်ကအပြုသဘောဆောင်တဲ့ခံစားချက်တွေကိုမကိုင်တွယ်နိုင်တော့သလိုပဲ။ လိုလိုက dopamine ကိုမတည့်ဘူး။ အကြာကြီးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးနောက်ကျွန်တော်ပြန်လည်နာလန်ထူလာသည်။ အာရုံကြောဓာတုဗေဒဆိုင်ရာအသုံးအနှုန်းများတွင်အတိအကျဖြစ်ပျက်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ။ အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်အတွက်တော့၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်၏သဘာဝဆုလာဘ်စနစ်ကိုမည်မျှအထိရှုပ်ထွေးစေခဲ့သည်ကိုအပြီးသတ်သက်သေသာဓကဖြစ်သည်။ porn ဒါအစွမ်းထက်သည်။
ယနေ့ငါနီးပါး2နှစ်ပေါင်း porn အခမဲ့ပါပြီ။ ငါနှစ်ခု relapses ခဲ့ကြခြင်းနှင့်ပြန်လည်နာလန်ထူအမြဲတစ်ခုပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကျေးဇူးတင်စရာအဲဒါကိုပထမဦးဆုံးအကြိမ်ခဲ့သကဲ့သို့မကောင်းတဲ့ရရှိသွားတဲ့ဘူး။ ငါသည်လည်းငါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေမှတပါး porn သို့မဟုတ်အခြားဆွမျှနှင့်အတူ masturbate နိုင်ပြီးမအစစ်အမှန်အနုတ်လက္ခဏာသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ရှာပါ။2နှစ်ပေါင်း porn အခမဲ့ -
90 ရက်ပေါင်း +
- ပိုမိုဆိုးရွား agoraphobia
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေးရအကြံဥာဏ်ရုံတစျခုအပိုင်းအစနေ့က 90 hit
တတိယ (သို့) စတုတ္ထအပတ်မှာငါခံစားခဲ့ရတာတွေထက်ပိုမိုဆိုးရွားတဲ့တွန်းအားတွေကြောင့်တစ်ညလုံးအိပ်ခဲ့ရတယ်။ ငါတုန်လှုပ်ချောက်ချားခြင်းနှင့်အက်ကြောင်းစွဲကဲ့သို့ချွေးခဲ့သည်။ နီးပါးအကြိမ်ပေါင်းများစွာဆေးလိပ်ဖြတ် ငါသာ ဆက်၍ သွားသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါဟာဒီခိုင်မာတဲ့တိုက်တွန်းမှုကိုနောက်တဖန်မတွန်းလှန်ချင်ခဲ့ဘူး၊ ငါမှန်တယ်။
relapse မပါဘဲပထမအကြိမ်အောင်မြင် 90 နေ့ရက်များ Streak ။ AMA!
ငါကအားလုံးကိုဖြတ်သန်းသွားတယ်။ ဆုတ်ခွာခြင်းလက္ခဏာများနှင့်အတူစိတ်လှုပ်ရှားခြင်း, စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့် flatline နှင့်အတူ။ ကျွန်ုပ်ခရီးစဉ်တွင်ကျွန်ုပ်ရရှိသောအကောင်းဆုံးအကူအညီနှင့်လှုံ့ဆော်မှုသည်ကျွန်ုပ်ခံစားခဲ့ရသောအရာများကိုကျော်ဖြတ်ပြီးသူတို့နှင့်စကားပြောသောသူများထံမှဖြစ်ကြောင်းသိရှိခဲ့ရသည်။ ဒီတော့ဒီမှာငါ .. ငါ့ကိုဘာမှမမေးပါ။
ဟေ့ကောင်တွေ၊ ဒီဟာကိုငါပထမဆုံးအကြိမ်ပို့ခဲ့တာပဲ၊ ဒါပေမယ့်မင်းရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကြောင့်ငါအားတက်လာတယ်။ ငါအငယ်တန်းမြင့်မားစဉ်ကတည်းကငါ porn နှင့်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာနှင့်အတူနပန်းပါပြီ။ ငါနဲ့ off ငါဖြစ်ရပြီ။ မကြာသေးမီကငါအထူးသဖြင့်စွဲခံစားရတယ်။ ငါရှင်းလင်းပြတ်သားစွာအကြောင်းအရာတောင်းဆိုခဲ့သောအခွင့်အလမ်းတိုင်းနီးပါး။ ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည် ၂ ပတ်အနေဖြင့် porn မပါဘဲ ၁ ၁ သည်ကျွမ်းကျင်မှုမရှိဘဲဖြစ်သည်။ ငါမကြာသေးမီကအတော်လေးနေမကောင်းဖြစ်သကဲ့သို့ငါခံစားရတယ်။ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ပျို့ချင်ခြင်း၊ စိတ်တိုခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ ငါသိတယ်ညစ်ညမ်းဓာတုမှီခိုမှုဖြစ်ပေါ်သည်အခြားမည်သူမဆိုဤကဲ့သို့သောရုပ်သိမ်းခြင်းလက္ခဏာတွေကြုံတွေ့ရသည်။ ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမဆိုဖြေရှင်းနည်းများ။ ငါတိုးတက်မှုကြည့်ဖို့စတင်နေပါတယ်, ဒါပေမယ့်နေတုန်းပဲ။ မသက်ဆိုင်တဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့ပြproblemsနာတွေကိုကျွန်မကောင်းကောင်းချည်နိုင်ပေမဲ့သင်ဘာပြောရမှန်းမသိချင်တော့ဘူး။
ပုံမှန်ပါပဲ နေ့ (၂၀) ​​ပြည့်နေ့တွင် ပိုမို၍ သည်းခံနိုင်လာသည်။ သို့သော်တွန်းအားများ၊ မိမိကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးခြင်းဟောပြောချက်စသည့်အတားအဆီးများစွာရှိနေသေးသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုခဲ့သည့်အတိုင်း dopamine မရှိခြင်းကိုဖြေရှင်းရန်ကြိုးစားခြင်းသည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်နှင့်စိတ်ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်အားပြောခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်အလွဲသုံးစားပြုခြင်း၊ သင်သည်ဤ“ စိတ်ခံစားချက်ဖြစ်စဉ်များ” ထဲမှတစ်ခုကိုသင်ကိုယ်တိုင်ဖမ်းမိသောအခါ၎င်းသည်အလုပ်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်၎င်းကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတိရရန်ကြိုးစားသည်၊ ပိုမိုလွယ်ကူပြီးပြောခြင်းထက်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ခံစားချက်များနှင့်အတွေ့အကြုံများအတွက်ဂျာနယ်ကိုလုပ်ငန်းစဉ်မှတစ်ဆင့်စတင်ခဲ့ပြီး၎င်းအားကျွန်ုပ်အားကြည့်ရှုရန်ကူညီသည်။ ငါဖတ်တိုင်း "ပြင်ပ" ရှုထောင့်။
မင်းရဲ့ခံစားချက်တွေကပိုခိုင်မာလာမယ်။ ငါ ၁၀ ရက်အတွင်းမှာအကြိမ်အနည်းငယ်၊ အမျက်ဒေါသ၊ ၀ မ်းနည်းခြင်းနှင့်ပျော်ရွှင်ခြင်းဟစ်ကြွေးတာတောင်မှငါငိုခဲတယ်။ သငျသညျတဖနျခံစားရဖို့စတင်နေပြီ။ ငါကိုယ်တိုင်လမ်းလျှောက်တာ၊ ရေချိုးတာ၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာ၊ အိပ်စက်ခြင်းလိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုငြိမ်သက်အောင်လုပ်ပါ။ အား ယူ၍ နေကြလော့။
Bro ငါသည်သင်တို့ကိုထုတ်ယူအပေါ်သင်ခံစားရသည်။ ၃ ရက်သာလျှင် (၂ ပါတ်ပါသော THC သည်အခမဲ့လည်းပါ ၀ င်နိုင်သည်။ သို့သော်သူကချွေးများ၊ ဦး နှောက်မှေးမှိန်ခြင်း၊ စိတ်ပျက်စရာများနှင့်ခေါင်းကိုက်ခြင်းများကို) သူကပြောတယ်။ အားကြီးသောလူကိုနေပါ။ ငါ့ကိုအမှန်တကယ်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေသောအစိတ်အပိုင်းများကိုဖြတ်သန်းနိုင်ရန်ရိုးရိုးသားသားကူညီရန် napping ကိုတွေ့ပြီ။ သငျသညျအေးဆေးတည်ငြိမ်တဲ့နေရာတစ်ခုကို Tho ငန်နိုင်ခြင်းနှင့်အရူးအချို့လျော့နည်းသွားသည်အထိဘာမှမလုပ်ပါက။ ငါကဒီပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကျော်ရသည့်အခါတိုင်းငါအရမ်းထွက်အလုပ်လုပ်မယ်
အသက် ၅၂ - ရက်ပေါင်း ၉၀ အပြီးအကျိုးခံစားခွင့်များစွာ။ ငါ SAA ကိုဆန့်ကျင်ဘာမျှမရှိသည်, ဒါပေမယ့်ငါ့အဘို့အလုပ်မလုပ်ဘဲ
ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ အသက်ရှူကျပ်ခြင်း၊ ဦး နှောက်မှေးမှိန်ခြင်း၊ စိတ်တိုလွယ်ခြင်းနှင့်စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်းမရှိခြင်း၊ အာရုံစူးစိုက်မှုမရှိခြင်း၊ လက်သည်းကိုက်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်သေနေရခြင်း၊ အစာစားခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်အသံနှင့်၎င်းသည်လူ၏ရက်ပေါင်း ၉၀ သာဖြစ်ပြီးတန်ဖိုးရှိသည်။ သူတို့ကိုသူတို့ဘက်ကမလိုက်နဲ့ သူတို့ပျောက်ကွယ်သွားပြီဆိုတာကိုသိရုံလေးနှင့်ကျွန်ုပ်ကိုလည်းကူညီနိုင်လိမ့်မည်။ အရင်ကငါတစ်ခါမှမကြားဖူးဘူး၊
ပြားချပ်ချပ်နံရံ, လိင်သို့မဟုတ်မှာအားလုံးဘာမှမစိတ်ဝင်စားမှု။ ငါ့အဘို့တစ်ပါတ်အကြောင်းကိုကြာမြင့်သောငါ့အဘို့ရုဇ်ထိန်းချုပ်မှုအချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်။
နေ့ 12: အဘယ်သူမျှမ PMO မရှိ Masturbtion ၏3နေ့ရက်များ
ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေယခု: ငါ brainfog ခဲ့တူသောပထမဦးဆုံး 12 ရက်ပေါင်းစဉ်အတွင်းခံစားရတယ်, ရောဂါလက္ခဏာတွေနဲ့တူအချို့တုပ်ကွေး, ငါတကယ်ဖယ်ရှားပစ်ရချင်တယ်အဘယ်သို့သောအရာမကောင်းတဲ့တင်းမာမှုခေါင်းကိုက်ရပါတယ်။ ကြိမ်မှာဖုတ်ကောင်, အခြို့အိပ်မပျော်, အနိမ့်စွမ်းအင်နဲ့တူသလိုခံစားရတယ်။ အများကြီးငြိမ်ဝပ်စွာနေခဲ့ကြပါပြီ, အခါသမယ၏စုံတွဲတစ်တွဲပေါ် Aspirin ကိုမှရွေးချယ်ကြပါတယ်။ တချို့ကလက္ခဏာ: အိပ်စက်ခြင်းဖြည်းဖြည်း, နေ့ 10 နှင့် 11 အပေါ်အနည်းငယ်ပိုပြီးစွမ်းအင်တင်းမာမှုအတွက်ပျော့လျှော့ချရေးတိုးတက်အောင်အစောပိုင်းကနှိုးထနေပါတယ်။ နောက်တဖန်မကွညျ့ဘယ်လောက်လှမိုဃ်းတိမ်ကိုစီးကိုသတိပွုမိ Started တစ်နည်းနည်းပိုပြီးဖတ်နေတော့တာပဲ။ ငါသည်ငါ့ဦးနှောက်, whack ထဲက dopamine အပေါ်နိမ့်သည်ကိုငါသိ၏။ ရုံဘာတစ်ခုမှနောက်တဖန်ကောင်းသောခံစားရတယ်။
ငါ ၇ ရက်မြောက်သောနေ့၌ငါသည်ညစ်ညမ်းသောအကျင့်ကိုဖြတ်ခြင်းမှကင်းလွတ်ပြီ။ ငါအကြိမ်စုံတွဲတစ်တွဲမတိုင်မီဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်အမြဲရက်သတ္တပတ်7ပတ်ပတ်လည်သို့မဟုတ်ထိုမတိုင်မီပင်ပြန်ပြောပြ။ သို့သော်ဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာများသည်ယခုကဲ့သို့မကောင်းသကဲ့သို့ဘယ်တော့မျှမဖြစ်ခဲ့ပါ။ ငါကစိတ်ဓာတ်ကျတယ်၊ အထီးကျန်တယ်၊ အကြှနျုပျ၏ libido အလွန်မြင့်မားခဲ့ပေမယ့်ဒီအတိတ်အပတ်ကကျောက်အောက်ခြေထိမှန်။ ငါ့ရည်းစားနဲ့လိင်ဆက်ဆံချင်တာကိုငါမနှစ်သက်တော့ဘူး၊ ငါဟာသူမကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုလည်းမရှိတော့ဘူးလို့ခံစားရတယ်။
လမ်းပေါ်မှာဒါမှမဟုတ်တခြားဘယ်နေရာမှာမဆိုငါမြင်တဲ့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြဲစိတ်ကူးယဉ်တတ်တယ်။ သို့မဟုတ်တစ်စုံတစ် ဦး နှင့်လိင်ဆက်ဆံရန်စိတ်ကူးယဉ်ရုံမျှသာရှိသည်။ သူမငါအမြဲတမ်းလိုချင်ခဲ့သောအရာအားလုံးဖြစ်ခဲ့ဖူးခြင်းမှာရူးသွပ်နေပြီးယခုကျွန်ုပ်သည်အခြားသူတစ် ဦး ကိုအမြဲတမ်းရှာဖွေနေသည်။ ငါသူမအပေါ်ဘယ်တော့မှမလိမ်ခဲ့ဘူး၊ ငါမှာဒီလိုစွမ်းအားမျိုးရှိမယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ ဒါပေမယ့်သူမနဲ့ထပ်ခါထပ်ခါလိင်ဆက်ဆံတာကိုခံစားရတာမျိုးဘယ်လောက်ကြာမလဲ။ ကျွန်တော့် ဦး နှောက်ဟာလုံးဝပြန်လည်ပြုပြင်ထားတယ် အဲဒါ fuck ဆိုတဲ့ပါ
နေ့ 90! PIED ပျောက်ကင်းအောင်ကုသ! ယခုတွင်ငါသည်ကျောက်များကဲ့သို့ကြည့်ရှု!
အကြှနျုပျ၏လိင်စိတ်သွားကြောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ အလုပ်အရပျ၌အကြှနျုပျ၏တီထွင်ဖန်တီးမှုတစ်ခုငုပ်ယူခဲ့ပါတယ်။ အစဉ်အမြဲငါအရင်ကထက်လျော့နည်းအာရုံစိုက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါ၏အဦးနှောက် PMO နိုင်ရန်အတွက်ငါ့ကိုစိတ်ဆင်းရဲအောင်ချင်တယ်ဆိုရင်ကြောင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါကြောက်မက်ဘွယ်သောခေါင်းကိုကိုက်ခဲခြင်းနှင့်ဦးနှောက်မြူရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါအချိန်တိုင်းစိတ်ဓါတ်ကျခြင်းနှင့်အမျက်ထွက်ခဲ့သည်။
တစ်လနီးပါးအဘို့အ Porn ရပ်တန့်။ ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ရလဒ်
အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ လူတိုင်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်နေတယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် ဒီတော့ငါ ၂၅ ရက်လုံးလုံးရပ်တန့်လိုက်ပြီ။ ငါတကယ်ကြည့်ချင်တဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူး။ ဒါပေမယ့်ရောဂါလက္ခဏာတွေကအရမ်းကြောက်စရာကောင်းတယ်။ RLS၊ မကောင်းတဲ့အိပ်စက်ခြင်း၊ brainfog၊ အလွန်အမင်းခန့်မှန်းခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ကျေးဇူးတင်စရာငါယခုဖြည်းဖြည်းရောဂါလက္ခဏာပျောက်ကွယ်သွားကြည့်ပါ။ ဒါဟာတကယ်မကောင်းတဲ့စို့သောကြောင့်ထိုသို့သောရှိနေမည်မျှော်လင့်ပါတယ်။ ငါအခုစိုက်ထူတွေအများကြီးရ။ သတင်းကောင်းကတော့ငါ့အတွက်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်အတူငါ့ရဲ့အော်ဂဇင်တွေဟာအရင်ကထက်ပိုပြီးအာရုံခံစားမှုပိုရစေတယ်။ ယောက်ျားတွေဘယ်လောက်ကြာကြာနေခဲ့တာလဲ။
အတွက် 110 ရက်ပေါင်း!
မိမိအရင်းမြစ်အမျိုးမှပယ်ရှင်းမည်သည့်စှဲလမျးသူကဲ့သို့ပင်ငါတကယ်တင်းမာနေတယ်, ထွက်အလေးပေးနှင့်ရန်လို။ ကျွန်မဘာမျှမယ့်ကိုကတန်ဖိုးရှိသလိုပဲနှင့်ဘာမျှမယ့်လမ်းအတွက်အရေးပါနဲ့တူပဲ, ဒါကြောင့်စိတ်ဓာတ်ကျခံစားခဲ့ရရှိရာတစ်ဦးစိတ်ပိုင်းပြားချပ်ချပ်ဇာတ်စင်ရှောက်သွားလေ၏။ ငါကအားဖွငျ့အကြှနျုပျကူညီနေသူတစ်ဦးကြောက်မက်ဘွယ်တာဝန်ခံမိတ်ဖက်ရှိသည်ဖို့ကံကောင်းခဲ့ပါတယ်။
နေ့ 50, ကြောက်မက်ဘွယ်ခံစား !!!
ငါနောက်ဆုံးတော့ငါ့အအိပ်မပျော်ဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်း, ခွေးနှင့်တူအိပ်ပျော်နေသောခဲ့တာအတွက် 40 ရက်ပေါင်း !!!
၁၇ နှစ်အတွက်တစ်ရက်လျှင်တစ်ရက်လျှင်တစ်ကြိမ် PMO ။ ငါ PMO ဖို့လိုအပ်ကြောင်းလုံးဝမခံစားရဘူး။ dopamine မရှိခြင်းသည်အမှန်ပင်စုပ်ယူသည်။ အဲဒါကောင်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်၊ ဒါဟာတကယ်ကိုယူတာပဲ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေခြင်းမဟုတ်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်အပေါက်တစ်ပေါက်ထဲ၌တွားသွားကာသေလိုသည်ကဲ့သို့ခံစားရသည်။ မဆိုအကြံဥာဏ်သို့မဟုတ်ကြင်နာစကားများတန်ဖိုးထားလိမ့်မယ်။
ဆုတ်ခွာမယ့်ဆွေးနွေးမှု symptoms- ။ share ပေးပါ,
ငါ relapse အောက်ပါတွေ့ကြုံခံစားသောငါ၏ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေတစ်ဦးကအကျဉ်းချုပ်။
နေ့ 0: ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ရွံမုန်းတဲ့, အမျက်ဒေါသ, စိတ်ပျက်, အကူအညီမဲ့အပြစ်ရှိတယ်အရှက်ကွဲခြင်းကိုစိတ်ပျက်မိကြောင်း, ပျင်းရိ, Self-ရွံမုန်းတဲ့, unmotivated ။ ဦးနှောက်မြူ။
နေ့ရက်များ 1-5: လှုံ့ဆော်မှု; စိတ်မရှည်ခြင်း, စိုးရိမ်ပူပန်, လီယံ, မျက်ဒေါသ, ကဘာမှမရှိ, ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်, အမျက်ဒေါသ, အမုန်း, အိပ်မပျော်, ခေါင်းကိုက်ခြင်း, Twitch ။ ကျူးကျော်။ အကြီးတွေက။ အနီရောင်မြင်လျှင်။ ဝါသနာအတွက်စိတ်မ။ အထီးကျန်မှုတွေ။ အိပ်မက်ဆိုး။
နေ့ရက်များ5+: လက္ခဏာတွေနောင်တစတင်နဲ့ကျွန်မပိုပြီးလှုံ့ဆော် feeling ကိုစတင်ပါ။ ဦးနှောက်မြူရှင်းလင်းရေး။ နံနက်သစ်သားပြန်။ အလွယ်တကူနှိုးဆော်ခြင်း။ အလိုဆန္ဒ၏အားကြီးသောခံစားချက်များကို။ စိုစွတ်သောအိပ်မက်။ positive စိတ်ခံစားမှုပြန်သွားပါ။ ရယ်သံများ, ချစ်ခြင်း, ဝမ်းနည်းမှု (ကောင်းသောဝမ်းနည်းမှု, အမှန်တကယ်တစ်ခုခုခံစား) ။ ဝါသနာပြန်စိတ်ဝင်စားကြောင်း။
ဒါဟာငါ "ပိုကောင်း" ခံစားရတယ်ငါ့စွဲ "ကိုကိုင်တွယ်" နိုငျကွောငျးကိုဘယ်မှာဤအချက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကယုံကြည်မှုအတွက်တိုးတက်မှု, လိင်စိတ်နိုးထနှင့်စိတ်ဓါတ်များအမှန်တကယ်ငါ့အကိုယ်ရံတော်ကိုဆင်းနှင့် relapse စေငါ့ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ငါသည်အခြားသောသူတို့အား '' အတွေ့အကြုံများမှစပ်စုမိပါတယ်။
Day 0: သင်နှင့်လုံးဝတူတူပါပဲ။ အပြစ်ရှိတယ်၊ အရှက်ကွဲတယ်ဆိုတာကိုသဘောတူပါ။ ငါအမြဲရှက်ကြောက်နေမိလို့ဒီဟာကိုငါမကိုင်နိုင်တော့ဘူး…
နေ့ ၁-၃ - ကျွန်ုပ်အတွက်ခက်ခဲဆုံးနေ့များမှာ၊ ကျွန်ုပ်သည်လိင်တူချင်းဆက်ဆံခံရခြင်း (လိင်တူဆက်ဆံခြင်းနှင့်မတူသောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်မဟုတ်) အတွက်ကြောင့်ဖြစ်သည်။
၄ ရက် - ယခု - လိင်အင်္ဂါဆုံးရှုံးခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း၊ အခြားသူများနှင့်တွေ့ဆုံလိုခြင်းစသည်တို့ကိုခံစားခဲ့ရသည်။ ဒီအစိတ်အပိုင်းဟာမကြာခင်မှာပျောက်ကွယ်သွားတော့မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။
ပထမအပတ်: ပြင်းထန်သောမတရားသော / flashbacks ။ ပြင်းထန်သော sensitive ကအမျိုးသမီးတွေ objectification, အလွန်မြင့်မားသုံးစွဲဖို့မလှူ။ မြင့်မားတဲ့စိုးရိမ်စိတ်။
2-3 ရက်သတ္တပတ်: ပြင်းထန်သောစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်စိတ်ပျက်အားငယ်မှု။ စူပါအနုတ်လက္ခဏာအတွေးများ၊ ယုံကြည်မှုများကိုကန့်သတ်ခြင်း၊ ကြောက်စိတ်တွေပိုဆိုးလာတယ်။ သတ်သေအတွေးများ။ အခြေခံအားဖြင့်နေအောက်မှာအနုတ်လက္ခဏာခံစားမှုတိုင်း၊ အရှက်ကွဲခြင်း၊ အပြစ်ရှိသည်၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ သူတို့ကဆုတ်ခွာခဲ့ကြပြီးနောက်ဆုံးမှာသူတို့သွားလိမ့်မည်ဟုသတိရ
3-4 ရက်သတ္တပတ်: စိုးရိမ်စိတ်နှင့်စိတ်ကျရောဂါအကြီးအကျယ်လျော့နည်းသွားသည်။ ကျွန်မကိုသုံးရက်ဆက်တိုက်လုံးလုံးအိပ်မောကျစေခဲ့တဲ့လိင်ဆိုင်ရာအိပ်မက်တွေမက်ခဲ့ဖူးတယ်။ အကြီးအကျယ်ခေါင်းကိုက်ခြင်း။ ပြင်းထန်သောစိတ်။ မှတ်ဉာဏ်တိုးတက်လာသည်။ ယုံကြည်မှုဖြည်းဖြည်းချင်းမြင့်တက်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာကာသအတွင်းရှင်းလင်းရေးနှင့်သိမြင်မှု function ကိုပိုမိုရှင်းလင်းဖြစ်လာသည်။ နက်ရှိုင်းတဲ့တစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံနားလည်ခြင်း။ စိတ်ကျရောဂါနီးပါးသွားပြီ။ ရောဂါလက္ခဏာများသည်နေ့တိုင်းတိုးတက်ကောင်းမွန်သည်။
အကွံဉာဏျနဲ့ငါ့ 1 တစ်နှစ်အစီရင်ခံစာ
နောက်တစ်ခုကငါစလုပ်တုန်းကငါခံစားခဲ့ရတဲ့ဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာတွေဖြစ်တယ်။ ရက် ၁ မှ ၁၂၀ သည်ကျွန်ုပ်အတွက်အဆိုးရွားဆုံးဖြစ်သည်။ အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကျွန်တော်အရမ်းတိုတောင်းတဲ့အချိန်တွေရှိခဲ့တယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုငါခံစားမိတဲ့အခါ၊ ဆက်သွားဖို့ငါ့ကိုလှုံ့ဆော်ပေးခဲ့တယ်။ ငါခံစားခဲ့ရတဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေကအလွန်အမင်းစိတ်တိုလွယ်ခြင်း၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသေကြောင်းကြံသည့်အတွေးများနှင့်ပြင်းထန်သောစိတ်ကျဝေဒနာ (လူတိုင်းအတွက်ဖြစ်ပျက်ခြင်းမရှိခြင်း)၊ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း၊ မငြိမ်မသက်ခြင်း၊ ဆုတ်ခွာခြင်းနှင့်ရုံအမျက်ဒေါသ။ ဒီဟာကအသံမကောင်းပေမယ့်သင်ဘာလုပ်ရမလဲ၊
၂၄ နှစ် - အံ့ effects ဖွယ်ကောင်းသည့်သိမြင်မှုဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများ၊ စိုးရိမ်စိတ်များမရှိတော့ခြင်း၊ အာရုံစူးစိုက်မှုသည်စင်ကြယ်သည်
အကြှနျုပျ၏ကန ဦး ဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာများအနည်းဆုံးပြောကြောက်မက်ဘွယ်သောခဲ့ကြသည်။ ငါစိတ်ဖိစီးမှုကနေပထမ ဦး ဆုံးရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းပြောင်သောအစက်အပြောက်စတင်ခဲ့ပြီးနှင့်ငါ alopecia ရောဂါရှာဖွေတွေ့ရှိသူအရေပြားအထူးကုဆရာနှင့်အတူခဲ့ရသည်။ နာကျင်သော cortisol ရိုက်ချက်များကိုကျွန်တော်သေသေချာချာမသိနားမလည်သောဒေသများ၌ရခဲ့သော်လည်းလအနည်းငယ်အတွင်းပြန်လည်ကြီးထွားလာသည်။ ထိုကာလအတောအတွင်းငါ၏အလူမှုရေးဘဝအဘို့အနွေး။ ငါမိသားစုတစ်စုသေဆုံးခြင်းကဲ့သို့စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာစိတ်ဒဏ်ရာတစ်စုံတစ်ရာခံစားခဲ့ရသလားဟုသူမအားမေးခဲ့သည်ကိုကျွန်ုပ်မှတ်မိသည်။ ကျွန်မမှာ resolution မြင့်မားတဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူမပြောစရာမလိုပါဘူး။ ငါဘာထပ်တွေ့ကြုံခဲ့တာလဲ ချွေးအေးများ၊ အိပ်စက်ခြင်းမရှိသောညများ၊ အနတ္တခံစားမှုများ (ပြည့်ဝစုံလင်သောညစ်ညမ်းကြယ်ပွင့်မိန်းကလေးများမရှိတော့ပါ၊ oh မဟုတ်ပါ)
အသက် ၂၉ နှစ် - အိမ်ထောင်သည်။ Porn-ED သွေးနှင့် Delayed သုက်လွှတ်မှုအောင်မြင်စွာအောင်မြင်ခဲ့သည်
ဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာတွေငါ့ကိုအကြီးအကျယ်ထိမှန်။ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း၊ အစာစားချင်စိတ်ပျောက်ဆုံးခြင်း၊ လုံးဝလုံးဝလုံးဝမရှိသောလိင်ဆိုင်ရာမောင်းနှင်မှုနှင့်မည်မျှကြာမြင့်သည်ကိုမည်သူသိသနည်း။
ဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာများပြင်းထန်သောခဲ့ကြသည်။ ငါအိပ်ပျော်ခြင်းဒုက္ခအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တော့ကျွန်တော်ဟာ Restless Leg Syndrome ရောဂါဖြစ်ပွားခဲ့တယ်။ သင်တစ်ခါမှမကြုံဖူးပါက၎င်းသည်မိုက်မဲသောအရာဖြစ်သည်။ အိပ်ယာထဲလဲနေပြီ၊ အိပ်ချိန်မှာလဲလျောင်းနေပြီးရုတ်တရက်ငါ့ခြေထောက်တွေလှုပ်ရှားရတော့မယ်။ ဒါဟာကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖြတ်သန်းနေတဲ့လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်နဲ့တူတယ်။ ထိုအခါတပြင်လုံးကိုအရာထပ်ခါတလဲလဲ repeat ။ ဒါဟာအလွန်စိတ်ပျက်စရာပဲ! ကျွန်တော့် ဦး နှောက်ကိုအမြဲတမ်းထိခိုက်ပျက်စီးစေခဲ့တယ်လို့ကြောက်ခဲ့တယ်။
ကျေးဇူးတင်စရာကမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေသောခြေထောက်များသည်နောက်ဆုံး၌အေးဆေးငြိမ်သက်သွားသော်လည်း ၂-၃ လခန့်ကြာသည်။ ဒါ့အပြင်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေနိုင်အောင်ကြိုးစားနေတယ်၊ တကယ်လိုပဲတကယ်ကောင်းတယ် ငါရုံသူမ၏နှင့်အတူဖြစ်ခြင်းကနေစိုက်ထူရနိုင်ခဲ့သည်။ အဲဒီနောက်ငါကတခြားနေရာမဟုတ်ဘဲအော်ဂဇင်မရောက်ဖို့ကြိုးစားရတယ်။ ငါစိတ်စွဲလန်းခဲ့ကြသောရငျးနှီးမှုအားလုံးမှာထိုနေရာတစျခုလုံးဖွစျခဲ့ပွီးငါလုပျဆောငျခဲ့သညျ့အရာအားလုံးမှာစိတ်ကူးယဉ်နယ်မြေတွင်မဟုတ်ဘဲအခြားတစ်နေရာတွင်ရှိရန်ဖြစ်သည်။
ငါကအရမ်းအေးဆေးတည်ငြိမ်တဲ့လူတစ်ယောက်ပါ။ ဒါပေမယ့် ၃ ပတ်လောက်ကြာတော့အသေးအဖွဲကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတော်လေးစိတ်လှုပ်ရှားလာတယ်။ ဒီဟာကတစ်ပတ်ကြာခဲ့တယ်
ပထမနှစ်တွင် NoFap အစီရင်ခံစာ
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ P ကိုလျှော့ချရုံကစက်တင်ဘာလမတိုင်ခင်လအနည်းငယ်မှာအလုပ်မလုပ်လို့ငါကြက်ဆင်ကိုဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
လှုံ့ဆော်မှု & တိုးမြှင့်ရန်လို, စိတ်ပျက်, စိတ်တို, စိတ်ဆိုး, တိုတောင်းသောဒေါသနှင့်အခြားအမျက်ဒေါသပုံစံများ, စသည်တို့ကို
ဂှေးစေ့နာကျင်မှုတစ်ခါတစ်ရံအတော်လေးနှောင့်အယှက်ဖြစ်ခဲ့သည် [မှတ်ချက်ကိုကြည့်ပါ “ အပြာရောင်ဘောလုံးများ” သို့မဟုတ်“ နှစ်သက်သူများအခွံမာများ” ကော။
ဆုတ်ခွာရုံလည်ချောင်းနာသည်။ ကျွန်တော့်မှာအိပ်မပျော်တဲ့ရောဂါဝေဒနာခံစားခဲ့ရတယ်၊ ဒီတစ်ခါလည်းကဆုတ်ခွာထံမှဖြစ်ကောင်းအခြားအရာတစ်ခုခု။ ငါမသိရသေးပေမဲ့လည်းဒီရှုထောင့်ကကြည့်ရင်အားလုံးရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တယ်။ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာအရာများအကြီးအကျယ်တက်လာ: စိတ်ကျရောဂါ, ထူးဆန်းတဲ့စိုးရိမ်မှုများ, တန်ဖိုးမရှိ။ ဒါဟာငါရုန်းကန်ခဲ့သမျှအရာအားလုံးပဲ - အားလုံးတပြိုင်နက်။ ဒါဟာတကယ့်ကိုဆိုးဝါးတဲ့နေ့ ၁၀ ကြိမ်ဖြစ်တာနဲ့တူတယ်။ နှင့်အညီ, သင်တန်း, horniness ။ သင်သည်သင်၏စိတ်ကူးယဉ်မှုကိုထိန်းချုပ်ရန်သင်အမှန်တကယ်စတင်လေ့လာနေသည်။ အကယ်၍ သင်မလုပ်ခဲ့ပါကသင်အဆင်မပြေမှုကိုခံစားရလိမ့်မည်။ ငါထင်တာကတော့လူတိုင်းကသူတို့ရဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေနဲ့မတူပဲကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့နည်းလမ်းတွေတီထွင်နေကြတယ်။ ပံ့ပိုးမှုအဖွဲ့များကဒီအတွက်အများကြီးကူညီသည်။
တခါတလေတစ်နေ့ကိုတစ်ရက်ထုပ်ပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာစီးကရက်သောက်ခဲ့တယ်၊ တစ်နေ့ကျတော့ငါဟာအအေးကြက်ကိုဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်၊ အခုဆိုရင်စီးကရက်မသောက်ဘဲတစ်နှစ်ခွဲလောက်။ ဒါကဖြတ်တောက်ခြင်းဟာရိုးသားဖြောင့်မတ်တဲ့အတွက် ၁၀ ဆပိုဆိုးတယ်၊ ဒီကြီးမားတဲ့အချိန်နှင့်အတူရုန်းကန်သူသည်အခြားမည်သူမဆိုသည်။ မင်းတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး
ကျွန်ုပ်၌ယုံကြည်မှုပြproblemနာအကြီးအကျယ်ရှိသည်ဟုခံစားရပြီးလူတစ်ယောက်ဖြစ်သည်ဟုမောက်စ်ခံစားမိသည်ကိုအလွန်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ၂၀၀၉ (အသက် ၂၀ တွင်) စစ်တပ်တွင် ၀ င်ရောက်ခဲ့ပြီးအခြေခံလေ့ကျင့်ရေးသို့ပို့ခဲ့သည်။ ၆ ရက်အကြာမှာကုန်းကုန်းပေါ်တက်လာတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ၀ င်ရောက်သောပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ကျွန်ုပ်မရင်းနှီးခဲ့ပါသော်လည်းကျွန်ုပ်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မျှရောဂါလက္ခဏာများကိုစတင်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ကျွန်မလက်တွေတုန်လာတယ်။ ငါရောဂါလက္ခဏာလိုတုပ်ကွေးရောဂါကူးစက်လာပြီးပုံမှန်ထက်ပိုပင်ပန်းလာသည်။ (ငါကောင်းသောပုံသဏ္wasာန်ရှိခဲ့သည်။ ) ငါအိပ်မပျော်ဖြစ်လာသည်နှင့်ငါနှောင့်နှေးခံရအထက်အဆင့်ကိုခံစားခဲ့ရသည်အထိငါ့ ဦး နှောက်ကိုချက်ချင်းနှေးကွေး။ ငါမိုက်မဲပြီးညံ့ဖျင်းသောအမှုတို့ကိုပြုစတင်ထိတ်လန့်တိုက်ခိုက်မှု။ တခြားအရာအားလုံးထက်ပိုပြီးအရေးကြီးတာကနှစ်တွေအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ကျွန်တော့်ငပဲဟာအရမ်းကိုစိတ်ထိခိုက်စရာကောင်းပြီးစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခဲ့တယ်။
ကျွန်တော်ဘာမှရှင်းပြလို့မရဘူး၊ အဲဒီမှာဆရာဝန်တွေလည်းမရှင်းပြနိုင်ဘူး။ ကံမကောင်းစွာပဲငါဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာများနှင့်သူတို့ကိုရှိသည်ဖို့အဆိုးဆုံးနေရာဖြစ်နိုင်သည်ငါကဖြတ်သွားခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်တပ်မှူးများကကျွန်ုပ်ဟာ pussy တစ်ယောက်လို့ထင်ပြီးအကောင်းဆုံးကိုထုတ်ယူဖို့ကျွန်မကိုတွန်းအားပေးခဲ့တယ် ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူး၊ ငါဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပိုင်းကိုဖြိုခွဲခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်မှာဘယ်ပစ္စည်းမှမရှိဘူးလို့ဆရာဝန်တွေကသိတယ်၊ ပြင်းပြင်းထန်ထန်စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ရောဂါရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးအိမ်ကိုပျက်ကွက်စေခဲ့တယ်။
လပေါ်တက်နေတယ်၊ ​​ငါ့ရည်းစားက ငါ့ရဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကို မြင်နိုင်တယ်။ အချို့သော အစိတ်အပိုင်းများကို သူမ အလွန်နှစ်သက်သည် ဥပမာ- ငွေထုတ်ခြင်းသည် ညသန်းခေါင်တွင် တခါတရံ ကျွန်မကို ပြင်းထန်စွာ ရိုက်ခတ်ခဲ့သည်။ လှုပ်နှိုးပြီး ဦးနှောက်က ငါ့ကို “တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေပါ၊ အခုပဲ တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေပါ” လို့ အော်နေပေမယ့် ငါမတုန်မလှုပ်မလှုပ်မယှက် သူ့ကို ဆုပ်ကိုင်ထားမယ်။ တခြားအဖြစ်များတဲ့ ဆုတ်ခွာတဲ့ လက္ခဏာတွေလည်း ခံစားခဲ့ရတယ်။
အကြှနျုပျ၏ reboot ပုံပြင်: 95 ရက်တောက်ပတဲ့ဘဝအခမဲ့ pmo 🙂
dopamine များအတွက် 1 ။ ) တဏှာ (တစ်ခါတစ်ရံပထမဦးဆုံးရက်သတ္တပတ်တွင်, p-ဆက်စပ် flashbacks တိုကျတှနျးထား) ။
2 ။ ပထမဦးဆုံး 60 ရက်အတွင်း) Moodswings (အများအားဖြင့်), တခါတရံတွင်ပင်ရက်သတ္တပတ် 60 ရက်အကြာမှာ။
။ 3) စိတျလှုပျရှားမှုတစ်ခါတစ်ရံတွင်အလွန်ပြင်းထန်သောခဲ့ကြသည်: ပင်ဈဟစျကျွောလေ၏အဘယ်ကြောင့်တကယ်မသိဘဲအချို့အသေးစားသောအရာတို့ကိုကျော်ငို။ တခါတလေကိုယ့်တစ်ဦးကိုမှန်ကန်အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲဒီတော့ပျော်ရွှင်ခဲ့ပါတယ်။
4) စိုစွတ်အိပ်မက် / ခေါ်ဆောင်သွားအိပ်မက်: ။ ကိုယ့်သာမိုးသည်းထန်စွာအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက် 1 အစစ်အမှန် "စိုစွတ်သောအိပ်မက်", ပြီးနောက်နေ့ကိုတိုကျတှနျးထားရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါကမင်းကိုခန့်မှန်းဦးနှောက်၏သန့်ရှင်းရေး၏အစိတ်အပိုင်းရဲ့, (စိုစွတ်သောမဟုတ်) ခေါ်ဆောင်သွားအိပ်မက်တွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါသည်ဤအိပ်မက်ပြီးနောက်အဘယ်သူမျှမအစစ်အမှန်ရမ္မက်ခဲ့ (အဘယ်သူမျှမသုတ်ရည်လွှတ်နိုင်အောင်လျော့နည်း dopamine) ။
5 ။ ) ငါတကယ်မရှိသည်အခြားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင်မပြေမျှစစ်မှန်သောခေါင်းကိုက်သို့မဟုတ်အပြာရောင်ဘောလုံးရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါမသိရပါဘူး, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွန်ကံကောင်းခဲ့ပါတယ်။
အချို့လူများကရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်အမှန်တကယ်ပျော်မွေ့ကြောင်းသတင်းပို့ကြသည်။ ရုတ်တရက်ပြင်းထန်သောအအေးမိခြင်းနှင့်လည်ပင်းမှလက်များသို့လက်ကောက်ဝတ်များအထိစီးဆင်းခြင်းကဲ့သို့သောဆုတ်ခွာခြင်းလက္ခဏာများကျွန်ုပ်ခံစားခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်သည်တည့်တည့်မစဉ်းစားနိုင်သကဲ့သို့နွမ်းပါးနေသည့်ရက်နာသည့်ခံစားမှုကဲ့သို့နှစ်ပတ်လုံးနီးပါးခံစားခဲ့ရသည်။
ငါ့ခေါင်းသည်အထူးသဖြင့်ရှေ့နှင့်အလယ်ဗဟိုတွင် ၂၄/၇ ဖြစ်သည်။ အကြှနျုပျ၏ ဦး နှောက် fuck ဆိုတဲ့အဖြစ်နာကျင်ခံစားရသည်။
တစ်ပတ်ပြီးရင်တောင်ငါကြည့်လိုက်တဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ပြီးငါကြည့်မိတယ်။ ငါမစဉ်းစားပဲလိင်အင်္ဂါကိုလှုံ့ဆော်ပေးတဲ့အရာမျိုး၊ ငါ့နှလုံးကအရမ်းကိုမုန်းတီးတဲ့သူလို့မြင်နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့်တူတူပဲ၊ ငါ့ ဦး နှောက်ကအပြေးအလွှားကိုလိုချင်တယ်၊ ငါ ၀ င်ရာခိုင်နှုန်း ၀ င်ကြည့်ရင်တောင်မှရွံရှာဖွယ်ဖြစ်နေတာတောင်မှအဲဒါကိုငါကြည့်ချင်နေတယ်။
ငါအိပ်မပျော်တာ၊ အမြဲတမ်းစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း၊ စိတ်တိုခြင်း၊ ငြီးငွေ့ခြင်းကငါ့ကိုသတ်နေခြင်းဖြစ်သည်။
ငါအရှုံးမပေးဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါဒါကိုထုတ်ဖို့လိုခဲ့တယ်။ ညစ်ညမ်းသောကပ်ဘေးကဲ့သို့သောညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။ အဲဒါမတန်ပါဘူး။
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကြုံတွေ့နေရသည့်အရာမှန်၏ပုံရိပ်ဖြစ်သည်။ (၅ ရက်မြောက်) (M က ၁၀ ကြိမ်ဖြစ်နိုင်သည်) နှင့်ကျွန်ုပ်သည်စိုးရိမ်စရာအကြောင်းမရှိဘဲညစဉ်ညတိုင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းခံရသည်။ ငါအိပ်ရာဝင်ဖို့အိပ်ရာဝင်တော့မယ်။ ohfuckohfuckifeellikeimdying ။ ကျွန်တော့်ရဲ့အိပ်စက်ခြင်းကစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စရာကောင်းပြီးအရည်အသွေးနိမ့်တယ်၊ အမြဲတမ်းအစာစားချင်စိတ်မရှိ၊ တကယ့်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်သတ်သေဖို့ကြံရွယ်ချက်၊
ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူး။ ငါကအားလုံးကိုမုန်း။ ငါ porn သည်ငါ့ ဦး နှောက်, ငါ့အတိတ်ဆက်ဆံရေး, ငါ့အလုပ်ဘဝ, ငါ့နေအိမ်ဘဝ, ငါ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာဘဝကိုပြုတော်မူသောအမှုကိုငါမုန်း။ ငါ fuck ဆိုတဲ့မုန်းတယ် shit ဒီလောက်ခက်သွားရင်ငါတောင်ထိုက်တန်လားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးခွန်းထုတ်မိတယ်၊ ဒါကခက်ခဲတဲ့အပိုင်းပဲဆိုတာသတိရရမယ်။ ပိုမိုလွယ်ကူလာသည်။ ဒီတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အဲဒါကိုငါမဖြေရှင်းတော့ပါဘူး။
သူငယ်ချင်းနဲ့ကပ်ထားပါ အား ယူ၍ နေကြလော့။
သွားမှာပါ။ ပုံမှန်ပါပဲ သင်ဟာတစ်နည်းနည်းနဲ့အထူးဖြစ်ကြောင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုမပြောပါနှင့်။ သင်လက်လျှော့သင့်တဲ့လက္ခဏာတွေကသင့်အတွက်အဆိုးရွားဆုံးဖြစ်တယ်။ မလုပ်ပါနဲ့ ဒါအားလုံးပုံမှန်ပါပဲ ဒီဟာဖြတ်သွားလိမ့်မယ်သင်မူကားလှိုင်းစီးရမည်။ ရောဂါလက္ခဏာတွေကိုသတိပြုပါ။ ပြီးတော့နောက်ထပ်ထပ်တပ်ကြည့်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်သည်ဂျက်သံတူ၏လက္ခဏာများကိုခံစားနေရသည်။ သို့မဟုတ် .. ငါအပူတပြင်းလက္ခဏာများခံစားနေရသည်။ မင်းလုပ်နိုင်တယ် မင်းတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်တော့ဘူး၊
ရက်ပေါင်း ၉၀ - ကျွန်ုပ်၏အပြောအဆိုနှင့်အပြုံးသည်ယခုအချိန်တွင်အလွန်လွယ်ကူပါသည်။ ငါဘယ်သူလဲဆိုတာနဲ့အဆင်ပြေပါတယ်
Aggression - ငါဟာအကန့်အသတ်မဲ့ကျူးကျော်မှုကိုကြုံခဲ့ရတဲ့အစောပိုင်းကာလတွေမှာအရာအားလုံးကိုချိုးဖျက်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တယ်။ အဆိုပါကျူးကျော်ယခုပိုမိုသန့်စင်ပုံစံသို့ morphed ပြီ, ဒါပေမယ့်ငါနေဆဲအခါတိုင်းပြီးတော့ primal ဗီဇခံစားရတယ်။ ငါလိုချင်သည်မဟုတ်ပေမယ့်ငါလိုချင်ရင်တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့မျက်နှာကိုအပြတ်ရှင်းပြီးအရိုးတွေကိုခွဲနိုင်တယ်လို့ခံစားရတယ်။ ငါလိုအပ်မယ်ဆိုရင်ငါငါ့ကျူးကျော်ကိုသုံးနိုင်သည်ဟုခံစားရသည်။ အရင်တုန်းကငါရန်ပွဲတစ်ခုကြုံခဲ့ရရင်ငါကောင်းကောင်းထိုးနိုင်မနိုင်ဆိုတာသံသယဖြစ်ခဲ့ရင်ငါဘာလုပ်မလဲလို့စဉ်းစားမိတယ်။
အောက်တိုဘာလအတွင်းမှာတော့ငါ 1-2 measly ရက်, 5-6 သနားစရာလက်ထက် မှစ. ငါ၏အအလင်းတန်းများဖြာတက်ရဖို့နိုင်ခဲ့ပါပြီ။ အသေးစားတိုးတက်မှုကလေး!
၁) ငါဘယ်တုန်းကမှခက်ခဲတဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးကိုမလုပ်ဖူးဘူး၊ ဒါပေမဲ့အဲဒါတွေကိုတားဆီးဖို့ကြိုးစားတာကဒါမျိုးပဲလို့ငါထင်တယ်။ ကျွန်တော့်လက်တွေတုန်ခါနေတယ်။ ရင်သပ်ရှုမောစရာကောင်းတဲ့မောင်းနှင်အားနဲ့ရင်ဘတ်ပေါ်မှာငါလက်တွေကဂျယ်လီလိုခံစားရတယ်။ ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်“ ပြန်ယူ” ပြီးပြန်ပြောင်းဖို့မဆုံးဖြတ်ခင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ ဒါဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ fuck ဆိုတဲ့ porn ၏အားလုံးအရမ်းများကဲ့သို့ခံစားရတယ်။ ငါ PMO ကိုမကျွေးသောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာ / ဦး နှောက်သည်စာသားအရှိန်နှင့်ထွက်လာသည်။
2) ငါလိမ်လည်ခံစားရတယ်။ PMO ကငါ့ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုခံစားနေရတဲ့ခံစားချက်တွေ၊ လှုပ်ခါမှုတွေ၊ အဲဒါမှားခဲ့တယ် နောက်မှငါဟာပိုကောင်းတဲ့ခံစားမှုမရှိခဲ့ဘူး၊ ငါထပ်တူခံစားရချင်ပါဘူး။
ထုတ်ယူလိုက်တာကနောက်လာမည့်အချိန်မှာငါအဆင်သင့်ဖြစ်မယ်၊ ရက်အနည်းငယ်အကြာမှာငါအဲဒီဆုတ်ခွာသွားတဲ့ခံစားချက်တွေကိုပြန်ခံစားရမှာသေချာတယ်၊ ဒါကခန္ဓာကိုယ်ကနေထွက်လာတဲ့အားနည်းခြင်း၊ အသက်ရှူရုံသက်သက်နဲ့ငါအဲဒီနေ့ကိုလုပ်ဖို့လိုအပ်နေတာကိုသဘောပေါက်ခြင်းပဲ PMO ၏အယူအဆကိုမထိုင်ပါနှင့်။ ငါလိမ်လည်မှုအတွက်နောက်တဖန်မကျချင်ကြဘူး။
ဒုက္ခ၏ 15 နှစ် Gone
ကျွန်တော်အသက် ၂၀ ကျော်တုန်းကညစ်ညမ်းမှုကငါ့ဘဝကိုဟန့်တားစေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနောက်ကွယ်မှာငါသိတယ်။ ငါအမြင့်ဆုံး caliber တစ်စွဲခဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါသို့သော်အဲဒီအကြောင်းလုပ်နိုင်ဘာမှမရှိဘူးဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်မမိဘတွေနဲ့အိမ်မှာနေတုန်းပဲ၊ အဲ့ဒီကိစ္စအတွက်ဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူး၊ ငါပြောချင်တာကကလေးငယ်တစ်ယောက်နဲ့အတော်တူတယ်။ တစ်နေ့ကို ၄-၆ နာရီကနေဘယ်နေရာကိုမဆိုကျွန်တော်ဖြတ်သန်းသွားတဲ့ပြွန်နေရာများကိုရှာဖွေပြီး၊ ကျွန်ုပ်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့လိင်တူချစ်သူတွေနဲ့လိင်တူချစ်သူတွေအကြောင်းဗဟုသုတများစွာနဲ့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာတွေလုပ်တယ်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က YBOP ကိုကျွန်ုပ်တွေ့သောအခါဤဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်ရှိသတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုမျိုချလိုက်ပြီး“ Fuck it” ဟုပြောလိုက်သည်။ ကျွန်တော့် Toshiba လက်တော့ပ်ကိုယူပြီးကျွန်တော့်မိဘတွေကားလမ်းပေါ်ကငရဲကိုရိုက်လိုက်တယ်။ ထိုအခိုက်မှာကျွန်ုပ်ဘဝ၏အကြီးမားဆုံးအလှည့်အပြောင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။
ဆုတ်ခွာသည့်ကာလသည်လုံးဝငရဲဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်သိသည်။ သို့သော်၎င်းမှတစ်ဆင့်မုန်တိုင်းနှင့်စွမ်းအင်ကိုငါတွန်းလှန်ရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုအခါငါပဲပြု၏။ ပထမဦးဆုံးရက်သတ္တပတ်ငါအိပ်မပျော်စိတျကူး၏အဆိုးဆုံးအမျိုးအစားရှိခဲ့ပါတယ်။ ရှိသမျှတို့ကိုငါပထမဦးဆုံး6ရက်ပေါင်းမှာအိပ်ပျော်ကျသွားသတိရကြပါဘူး။ ကြှနျတေျာ့စိတျထဲမှာပါကရေတပ်တံဆိပျကိုလေ့ကျင့်သင်တန်း၏ငရဲအပတ်လွယ်ကူသောကြည့်ရှုစေခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်နောက်တော်သို့လိုက်သောရက်သတ္တပတ်အတွင်းအမှုအရာနည်းနည်းလှညျ့စတင်ခဲ့ပေမယ့်တကယ်အကြောင်းကို3လအကြာသိသာဖြစ်လာခဲ့သည်။ တကယ်တော့အမှုအရာလုပ်ဖို့စွမ်းအင်ရတဲ့စတင်ခဲ့သည်။
မေတ္တာရပ်ခံသည့်အတိုင်းဤနေရာတွင် (နေ့က2အပေါ်တွေ့ကြုံ) ငါ၏အဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေနေသောခေါင်းစဉ်:
ကိုယ်ဝန်သည် ၁၃ နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတစ် ဦး ကဲ့သို့ကောင်းသောအခြေအနေများပြောင်းလဲခြင်း။
- ပြင်းထန်။ မခံနိုင်သောအထီးကျန်ခြင်း။
- တင်းမာမှု - ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ကြွက်သားများပျော့ခြင်း၊ တောင့်တင်းခြင်း၊ သွားများကိုဖိအားကဲ့သို့ခံစားခြင်း။
–Panic တိုက်ခိုက်မှု (ရှားပါးသော်လည်းဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်)
- လိင်အလိုဆန္ဒမရှိသည်…ကျွန်ုပ်သည်နောက်တစ်ခါညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာကိုဖမ်းမိသည်အထိ (သို့မဟုတ်မကြည့်ဘဲအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်း) သည်။
- စိတ်မရှည်စွာစားသောအစားအစာများ။ ၂၄ နာရီအတွင်းအညိုရောင်တစ်ခုလုံးနီးပါးကိုစားခဲ့သည်။
- ငါကတေးရေးဆရာပါ။ ငါမရေးတတ်ဘူး။
–The Idi, ငါတိုတောင်းတဲ့ FUSE ရှိသည်,! LOL ငါဒီလိုခံစားရတဲ့အခါလူတွေကိုကင်လုပ်ခိုင်းနဲ့ဆက်ဆံတာ။ ဒါကအဆိုးဆုံးလက္ခဏာပါ။
[ငါးပတ်] Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကြောင့်ငါဆေးလိပ်ဖြတ်ခဲ့သည်။ ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့်မငြိမ်သက်မှုအိပ်ပျော်ခြင်းအပြင်ငါလူအများပြောသောဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာများမရှိခဲ့ပါ။ အဲဒီအစားငါဘာမှမခံစားရ။ ကျွန်မမှာလိင်စိတ်နည်းနေသလိုပဲ။ နံနက်သစ်သားမရှိပါ။ စိုစွတ်သောအိပ်မက်မရှိ။ အဘယ်သူမျှမအလိုအလျောက်စိုက်ထူ။ အဘယ်သူမျှမမတရားသော။ ချိုချိုသာမရှိပါ ငါ၌လိင်ဆက်ဆံရန်အခွင့်အရေးရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာသည်တုံ့ပြန်ခြင်းမရှိပါ။ ငါ tango အတန်းတွေတက်နေတယ်၊ ​​ဒါကြောင့်ကျိုးကြောင်းညီညွတ်တဲ့လူမှုရေးပေါ့။ ဒါပေမယ့်ငါက libido လက္ခဏာမပြသေးဘူး။ ငါလှလှပပမိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်အတူကခုန်နိုင်ပြီးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုလုံးဝမရှိပါ။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်လို့ ဦး နှောက်ကသိတယ်၊ ငါ့ကိုဆက်ထိန်းထားနိုင်သည့်အရာမှာကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်ကိုပြန်ဖွင့်ပြီးပုံမှန်ပြန်ဖြစ်နိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်၏ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်စိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ် [သူကပြု၏။]
၃ ရက်၊ ၄ ရက်လောက်နေပြီထင်တယ်။ ငါပုံမှန်ထက်စောပြီးနိုးလာတယ်။ ကျွန်မရဲ့နှလုံးဟာအနားယူသင့်တဲ့အချိန်ထက်ပိုပြီးတုန်နေတယ်၊ ​​မနက်မှာအစာစားချင်စိတ်မရှိဘူး၊ ဒါပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲငါ့အစာအိမ်ကလည်းမြည်နေတယ်။ အရူးလိုမျိုး (သူကသူ့ဟာသူစားတာနဲ့တူတယ်) အချိန်တိုင်းတွင်ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊ ဦး နှောက်မြူ / ပျော့ပျောင်းသောခေါင်းကိုက်ခြင်းသည်ထာဝရတည်မြဲစေပြီး Advil ကဘာမှမလုပ်နိုင်ပါ။ ဤအကြုံနေရမည်သူမဆို?
ကြင်နာပါ။ သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ဦး နှောက်နှစ်ခုလုံးလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
yeah ငါမှတဆင့်မယ်အတိအကျဘာနဲ့တူအသံ။ ဤသည် shit လေးနက်ဖြစ်ပါတယ်။ fam သွားထားပါ။ သငျသညျပြန်သွားကြသည် အကယ်. နောက်တဖန်ဒီနာကျင်မှုကတဆင့်သွားလိုပါလိမ့်မယ်။ အဘယ်သူမျှမကိစ္စအဘယ်အရာကိုခိုင်ခံ့သွားစောင့်ရှောက်ဖို့သတိပေးအဖြစ်ထားပါ။
ဤဖြစ်စဉ်သည်ဆေးခြောက်ဖြတ်ခြင်းနှင့်အမှန်တကယ်ဆင်တူသည်ကိုယခုငါသဘောပေါက်သည်။ မင်းရဲ့စိတ်နေသဘောထားကတစ်နေ့လုံးအပြောင်းအလဲကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးသင်ဟာနံနက်စောစောနဲ့စတင်ပြီးမကောင်းတဲ့နေ့တစ်နေ့၊ ပျမ်းမျှတစ်နေ့တာဒါမှမဟုတ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့နေ့တစ်နေ့ဒါမှမဟုတ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့နေ့ကနေစထွက်နိုင်ပေမယ့်ကောင်းတဲ့ညတစ်ညဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါဆေးခြောက်ထုတ်တဲ့လက္ခဏာတွေရှိနေတုန်းပဲ။
ဟေ့လူတိုင်းငါ့ဒီမှာပထမဆုံးပို့စ်ပဲ။ ကျွန်ုပ်သည် ၂၁ ရက်လုံးလုံးညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကင်းမဲ့နေပြီး၎င်းမတိုင်မီ ၁၀ ရက်အကြာတွင်အရက်သောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည် ၁၉ နှစ်ဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကို ၅-၆ နှစ်ကြာကြည့်ခဲ့သည်။
လူတွေကလည်းခက်ခက်ခဲခဲဖြတ်သန်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ကြမ်းတမ်းတဲ့အချိန်တွေမှာကြုံခဲ့ရလားလို့ငါမေးချင်ခဲ့တယ်။ ဆိုလိုတာကတော့နေ့တစ်ရက်မှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုမစဉ်းစားဘူး၊ ပြန်လာချင်တယ်လို့မထင်ဘူး၊ ဒါပေမဲ့ ၉-၁၀ ရက်တုန်းကအိပ်ပျော်နေတဲ့ပြsomeနာတွေနဲ့ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်မှုအနည်းငယ်နဲ့ငါအရမ်းစိုးရိမ်ခဲ့တယ်။ ဒါကပိုကောင်းလာတာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်မပြောနိုင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်မကြာသေးမီကငါ့ဘဝမှာစိုးရိမ်စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်အများကြီးမလုပ်ခဲ့တာလား၊ ဒါကပုံမှန်လားဟုတ်လားလို့မေးချင်တာပဲ၊ ငါကနုတ်ထွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်အထိပေါ်မလာဘူး။
တစ်ဦး Streak စတင်ပြီးနောက်ဖျားနာရယူခြင်း?
ဒီဟာကကျွန်တော် ၁၅ ရက်ဝန်းကျင်လေးကြိမ်မြောက်လေးကြိမ်မြောက်ပါ။ ဖျားနာခြင်း၊ သာမန်အအေးမိခြင်းနှင့်ခေါင်းကိုက်ခြင်းအခြေခံအချက်များသာအဓိကမဟုတ်ပါ။ အခြားမည်သူမဆိုဒီကြုံတွေ့ရ? ထုတ်ယူခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုလား
NoFap ကကျွန်ုပ်အားညှစ်ခြင်းထက် ပို၍ အကျိုးသက်ရောက်သည်…
နေ့ ၈ မှ ၁၂ အထိမလွယ်ကူခဲ့ပါ။ ငါနေမကောင်းဖြစ်တဲ့အခါ! ဖျားတာ၊ တုပ်ကွေးလိုခံစားရတယ်။ ငါမဟုတ်ခဲ့သိတယ် အကြောင်းပြချက်ကရောဂါလက္ခဏာတွေဟာနာရီတိုင်းဒါမှမဟုတ်ဒီအတိုင်းပဲပြောင်းလဲနေလို့ပဲ။ အကြှနျုပျ၏ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန် homeostasis ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ရုန်းကန်, တက်လာခဲ့သည်။
အေးခဲနေသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလဖြစ်သည့်ထိုအချိန်အတောအတွင်းကျွန်ုပ်သည်ပူမည်ဟုခံစားရပြီးနောက်တဖန်အေးခဲ။ ပြန်လာလိမ့်မည်။ တခါတရံမှာကျွန်မရဲ့လည်ပင်းဟာလောင်ကျွမ်းပြီးကျွန်မရဲ့မျက်နှာကအေးစက်သွားတယ် ကျွန်တော့်ရင်ဘတ်၏ညာဘက်တစ်ဝက်သည်အေး။ အခြားတစ်ခုမှာပူသောအချိန်တွင်အဆိုးဆုံးအပိုင်းဖြစ်သည်။ ငါစာရေးဆရာဖြစ်ပေမဲ့အဲဒါကိုမဖန်တီးနိုင်ခဲ့ဘူး။
၉-၁-၁ ကိုခေါ်ရန်အဆင်သင့်ဆဲလ်တစ်လုံးကိုကျွန်ုပ်ခံစားခဲ့ရသော်လည်းကျွန်ုပ်မပြုခဲ့ပါ။ ဒါဟာလုံးဝကျိုးနပ်ခဲ့ပါတယ်, ဒီဆုတ်ခွာ။
ပထမခုနစ်ရက်သည်အရူးဖြစ်၏ (ဇွန်လ ၂၀၁၃) ။ ဤစာဖတ်ခြင်းအများစုသည်ပထမခုနစ်ရက်၏ပြင်းထန်သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ“ မောင်းနှင်မှု” ကိုခံစားခဲ့ရကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်တွင်ထူးဆန်းသောအမြန်နှုန်းဖြင့်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ အဆုံးမဲ့တွန်းကန်ခြင်းနှင့်သူရဲကောင်းပျော်ရွှင်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
ကျေးဇူးတင်စရာ, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထုတ်ယူမျှ FAP ၏တတိယရက်သတ္တပတ်များကအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ဒီနရောမှာငါအစဉ်အမြဲငါ, ငါ၏အသက်တာ၏အတိတ်သုံးနှစ်အတွင်းခံစားခဲ့ရဖူးအကြီးမြတ်ဆုံးခံစားရတယ်။ တဖန်ငါအထက်တန်းကျောင်းငါ၏ပထမနှစ်နှစ်တွင်ခဲ့တူသောစိတ်ပိုင်း, ရုပ်ပိုင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းငါခံစားရတယ်။
ဒါကြောင့်ဝေးနေ့6နှင့်ရောဂါလက္ခဏာ
- ခေါင်းကိုက်ခြင်း (ယနေ့ပိုမိုဆိုးရွားလာခြင်း)
- တကယ်တင်းမာနေသောပခုံးများ / လည်ပင်း
- ဦး နှောက်မြူ
- အလွန်အကျွံစားလိုသောဆန္ဒ (ကျွန်ုပ်၌ဤမျှလောက်များပြားသော်လည်း)
ထုတ်ယူစို့။ ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုအကြောင်းအလုံအလောက်မပြောကြဘူး။ သူတို့ကျရှုံးတာပေါ့။ ၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်၏ dopamine ယိုယွင်းနေသောဓာတုဆုိုင်ရာစင်တာဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အားတောင်းစားခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ အပြစ်ပေးခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ထံတောင်းပန်ခြင်း၊ ထုတ်ယူခြင်းများသည်နာကျင်စေသည်၊ ၎င်းတို့သည်ကာယ၊ စိတ်ပိုင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှုဖြစ်သည်။ ချွေးထွက်ခြင်း၊ ချွေးထွက်ခြင်း၊ ထူးဆန်းသည့်နေရာများတွင်ထူးဆန်းသောနာကျင်ခြင်း၊ ဆေးလိပ်ဖြတ်သောအခါကျွန်ုပ်တို့ခံစားရသော ဦး နှောက်မြူများနှင့်မနှစ်မြို့ဖွယ်အရာအားလုံးကိုပြောပြရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဦး နှောက်၏နည်းလမ်းကအန္တရာယ်ကင်းသောပြင်ဆင်မှုအနည်းငယ်ဖြင့်ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်သည်။ ဆေးကုသမှုခံယူစဉ်ကျွန်ုပ်၌အကှေ့ရောဂါကူးစက်ခံရပြီးသွားများကအမှန်ပင်နာကျင်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်မှာအကှေ့ရောဂါမရှိခဲ့ဘူး၊ သွားတွေကလည်းအဆင်ပြေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်ငါ့ရဲ့ ဦး နှောက်ကအချို့အဆင့်မှာငါ့ကိုညစ်ညမ်းစေတဲ့ dopamine ထုတ်လွှတ်မှုကနေတဆင့်ငါ့ကိုစိတ်ရောဂါခံစားစေခဲ့ရတယ်။
ကောင်းသောအချက်မှာ၊ သင်သည် ဆုတ်ခွာနေပါက၊ သင့်ဦးနှောက်၏ dopamine အဆင့်သည် ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်နေပြီဟု ဆိုလိုသည်။ သင်ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်တဲ့အခါ အဲဒီအရာတွေရပ်သွားပေမယ့် သင့်ဦးနှောက်က ပြန်လည်ဟန်ချက်မညီမချင်း ပုံမှန်အတိုင်းပြန်မရနိုင်ဘဲ၊ သင်နဲ့စကားပြောတဲ့ပေါ်မူတည်ပြီး ရက်ပေါင်း 11 နဲ့ 90 ကြားကြာပါတယ်။ ကျွန်တော် ပုံမှန်အားဖြင့် အသက် 11 နှစ် မှ 40 နှစ်ကြား ဧည့်သည်များ အနေဖြင့် ဤသည်မှာ လွယ်ကူမည်မဟုတ်ပါ၊ ခက်ခဲလိမ့်မည်၊ ခက်ခဲလိမ့်မည်၊ ဤဝေဒနာကို ခံနိုင်ရည်ရှိရန်၊ ၎င်းကို ဆုပ်ကိုင်ထားရန် လိုအပ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ တာဝန်ကို ပြီးမြောက်စေလိုပါက ဒိုပါမင်း ထုတ်လုပ်မှုကို ပြန်လည်ရယူလိုခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ ပုံမှန်
60 ရက်ပေါင်း - ဘာမျှမထံမှတစ်စုံတစ်ခုမှ
ဘယ်လိုခရီးခဲ့သလဲ ငါအကြီးအကျယ်စွဲဖြစ်သကဲ့သို့ငါ၏အခရီးငါအကြောင်းကိုတစ်နှစ်ဆုတ်ခွာသံသရာ၌ရိုက်ပုတ်ခံခဲ့ရသကဲ့သို့ငါတစ်နေ့ 1 သူ့ဟာသူထံမှပြင်းထန်သောထုတ်ယူရင်ဆိုင်ခဲ့ ... တကယ်ခက်ခဲများနှင့်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်ခဲ့သည် ...
ထုတ်ယူ: ငါ့အထုတ်ယူအလွန်မြင့်မားခဲ့ကြသည် ... ငါစိုးရိမ်ပူပန်တယ်, နေ့ 54 သည်အထိနေ့စဉ်ဆုတ်ခွာအဖြစ်တိုက်ခိုက်မှုစိုးရိမ်ထိတ်လန် ... ငါတုန်ခါ, ဦးခေါင်းဖိအား, မူးဝြေခင်း, ဂျယ်လီခြေထောက်, အနိမ့်စွမ်းအင် etc..My BP တူသောအပေါငျးတို့သစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောလက္ခဏာများပင်ယခုမြင့်မားသည်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည် ငါ့ဦးနှောက်နေဆဲစိတ်ဖိစီးမှုကိုင်တွယ်ရန်မည်သို့မည်ပုံမသိကြောင့်ပြန်လည်နာလန်ထူမှုကြောင့်င်အလွန်သေချာဖြစ်ကြောင်းကို ..
Flatlined: ငါသည်ဤ journey..First စဉ်အတွင်းနှစ်ကြိမ် flatlined နေ့က 1 ကနေနေ့က 14 ဖို့ပဲ .. ငါ့အဒုတိယ flatline နေ့က 24 မှာစတင်ခဲ့နေ့ 54 မှီတိုင်အောင်ကြာမြင့် ... ဒုတိယအတဦးတည်းကအရမ်းရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ကြီးကအလွန်ရှည်ခဲ့ ..
အကျိုးကျေးဇူးများ: ... ကြှနျတေျာ့အိပျပျြောတိုးတက်နေသည်ကျွန်မရဲ့ယေဘုယျစိုးရိမ်သောကများနှင့်ထိတ်လန့်တိုက်ခိုက်မှုကွာနေ့က 54 ကနေသွားကြဖို့စတင် ... အကျိုးကျေးဇူးများကိုမှန်ကန်ဖြစ်ကြပြီးငါမည်သူမဆိုအာမခံနိုင် ... ကျွန်မရဲ့ယုံကြည်မှုလွန်စွာတိုးပွါး ... ကျွန်မရဲ့လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်နီးပါးလည်းမရှိခဲ့ချေသည် ... စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနသည်ကောင်းပေမယ့်ငါကို BP ရှိ ပြဿနာဒါနေဆဲငါစိတ်ဖိစီးအခြေအနေများပြီးနောက်စွမ်းအင်ရုတ်တရက်တစ်စက်ခံစားရတယ် ...
ငါအိပ်မက်မက်ခဲ့ဖူးသမျှအိပ်မက်တွေမက်ခဲ့ဖူးတယ်၊ ငါဘယ်သူ့ကိုမှမပြောဘဲမနေချင်ဘူး။ ဆုတ်ခွာခြင်းမှတစ်ဆင့်၎င်း၏စိတ်သည်၎င်း၏စိတ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်မကြာမီအဆုံးသတ်တော့မည်ဟုမျှော်လင့်မိသည်။ နောက်ဆုံးတွင်ကောင်းသောညတစ်ညအိပ်စက်ခြင်းအတွက်တဖန်ပြန်သွားနိုင်သည်။
အမ်ငါ့ကိုတွေ့ခွင့်ပြုပါ ... ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အဘို့အအိပ်စက်ခြင်း။ အာရုံစူးစိုက်နိုင်ခြင်း။ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့်အထီးကျန်အထီးကျန်ခြင်း။ Hmm ငါ့ကိုရိုင်းစိုင်းတဲ့မှန်းဆခိုင်းတယ်။
ငါ၏အရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုတ်ခွာအများကြီးအများကြီးလျော့နည်းပြင်းထန်ခဲ့ကြအစစ်အမှန်မူးယစ်ဆေးဖြတ်နှင့်အတူတွေ့ကြုံနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ ဒါကကျွန်မအတှေ့အကွုံဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ပိုပြီးသင်ကော်ဖီသင့်ရဲ့နံနက်ခွက်ကိုလွဲချော်လျှင်၏စကေးကပြောကြားခဲ့သည်။ စင်စစ်အချို့ကွော, နှောင့်အယှက်အိပ်စက်ခြင်းပဲလွှမ်းမိုးသောတိုက်တွန်းပါသည်။
စိတ်ပိုင်းအကြှနျုပျ၏လက္ခဏာတွေ benzo စွဲနှင့်အတူတန်းတူဖြစ်ရပြီငါတောင် benzo ယူဖူးပါဘူး။ ငါရှည်, အချိန်ကြာမြင့်စွာ unfunctional ခဲ့ကြပြီ။ အနည်းငယ်တိုးတက်မှု, အသံမှ sensitivity ကိုနဲ့အလင်း, ရူပါရုံ၌အလင်းနှင့် floaters တောက်တွေ့မြင်လွန်း 9-11 လအတွင်းယူ Pshycomotor ဉာဏ်ရည်မမီ, အိပ်မပျော်, တသမတ်တည်းဦးနှောက်မြူ။
Edit ကို: သင်၏ဦးခေါင်းများကဲ့သို့ခံစားရကြောင်းအချိန်ရောကျသောခေါင်းကိုတင်းမာမှု / ဖိအားမှာဘုရားကျောင်းနှင့်မျက်စိတစ်ဦးဒုနဲ့တူအတွက်အနာတဲ့သည်ပေါ်နဲ့ off 340 ရက်ပေါင်းကျော်သည်ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့သင်မူကားရှည်လျားအလုံအလောက်ဝေးနေဖို့နဲ့ porn ထက်အခြားအခြားအရာတစ်ခုခု qith ur ဘဝကိုဖြည့်ပါကမေ့လျော့နေသည်။
လူတိုင်းမသူတို့ကိုရရှိသွားတဲ့ငါမဆိုမရှိခဲ့ဘူး။ သို့သော်လူများစွာကသူတို့ကိုဖော်ပြရန်ကြဘူး။ ဒါနဲ့ဒါပုံပါဘဲ။
ဟုတ်ပါတယ်။ porn အိပ်မက်များသူတို့ထဲကတဝတည်းဖြစ်ကြ၏။
ငါမှာအတူတူပါပဲ ငါအိပ်ပျော်ခြင်းနှင့်ကြည့်ရှုခြင်းအကြောင်းကိုအကြောင်းပါသောအိပ်မက်ကိုမြင်မက်။ ငါနိုးလာတဲ့အခါခံစားခဲ့ရပေမယ့်မခံစားရဘူး။ ဒီပစ္စည်းပစ္စယပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး အပေါ်တစ် ဦး အားကြီးသောကိုင်ရှိပါတယ်
ဘိန်းဖြူဆုတ်ခွာခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဘာမှမပါ။ သို့သော်ဟုတ်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်အတွက်၎င်းသည်ညလုံးအိပ်။ မရသည့်ရုန်းကန်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုတွင်အလှည့်အပြောင်းပြုလုပ်နိုင်သောအချိန်ဖြစ်သည်။ မင်းလာမယ့်အကြောင်းသိတဲ့နေ့ (တစ်ပါတ်တစ်ကြိမ်တကြိမ်တခါတခါထိမှန်သည့်အခါ) ကြိုးစားပြီးလေ့ကျင့်ရန်အကြံပေးလိုပါတယ်။
လုံလောကျတဆယ်လကြာအနီး။ အိပ်မပျော်, Twitch, စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့် flatline (အနိမ့်လိင်စိတ် / အားနည်းနေစိုက်ထူ) ။
သင်တစ်ဦးခက် core ကိုစှဲလမျးသူဖြစ်လျှင်ထို့နောက် yeah, ကအစစ်အမှန်ထက်ပိုပဲ!
ငါတစ်နှစ် pornfree ဖြည့်စွက်ရန်နှင့် ပတ်သက်. ခဲ့သောအခါငါအသေးစိတ် post ကိုရေးသားခဲ့၏။ ငါဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေများအတွက်အပိုင်း၌ထားလေ၏။ သင်ကူညီပေလိမ့်မည်။
ဟုတ်တယ်။ အခြားသူများဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၎င်းတွင်အိပ်ပျော်ခြင်းသို့မဟုတ်လုံးလုံးအိပ်မပျော်ခြင်း၊ ချွေးထွက်ခြင်း၊ အလွန်ထင်ရှားသောအိပ်မက်ဆိုးများ၊ စိတ်လှုပ်ရှားစရာများ၊ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း၊ အာရုံစူးစိုက်နိုင်ခြင်းမရှိခြင်း၊ သင်မျှော်လင့်ထားသည့်အာရုံကြောဓာတုပစ္စည်းများပြန့်ပွားနေပြီးသင်၏ ဦး နှောက်ကထိုအရာကိုတုံ့ပြန်သည်။ ပြင်းထန်မှုအချို့အတိုင်းအတာအထိပုဂ္ဂလဒိis္ဖြစ်ပါတယ်။ မင်းအတွက်တကယ်တော့ဒါဟာစိတ်ရှုပ်စရာပဲ။
မူးယစ်ဆေးဝါးပြန်လည်ထုတ်ယူခြင်းနှင့်တူညီသည်ကိုမှတ်ချက်မပေးနိုင်ပါ။ ပစ္စည်းအမျိုးအစားများကိုရုပ်သိမ်းခြင်းသည် ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်စနစ်ပြတ်တောက်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်လက္ခဏာများသာမကဘဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှီခိုနေရမှုကိုလည်းပါ ၀ င်နိုင်သည်။ ကြောင်းအမူအကျင့်စွဲတွင်အကြီးအကျယ်ပျက်ကွက်သည်။
ငါ့အဘို့အကြီးမားဆုံးအပေါ်စိတ်တိုတာတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်အချိန်မှာငါပထမဦးဆုံးသည့်အခါသန့်ရှင်းတဲ့ကျွန်မရက်အနည်းငယ်တစ်ခု asshole ဖြစ်ခဲ့သည်။ အရာအားလုံးငါ့ကိုအမျက်ထွက်စေခဲ့သည်။ သငျသညျအလေးအနက်စိုးရိမ်ပူပန်ခံစားရတယ်ငါတကယ်တဦးတည်းအမှတ်မှာထိတ်လန့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရသည်။ ဆုတ်ခွာ legit ဖြစ်ပါသည်
ဟုတ်ပါတယ်။ အလွန်ဒါ။ ငါဒါမကောင်းတဲ့စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံခံကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိုက်ခိုက်နေဖြတ်ခံခဲ့ရသောအခါငါအိပ်ရာထဲမှာထားကြ၏။
ငါစိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့်အာရုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းကိုတွေ့ကြုံခံစားနေရသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အား porn မှရှောင်ကြဉ်ခြင်းနှင့်ဆက်နွယ်မှုရှိမရှိမသေချာပါ။ နှစ်ပေါင်းများစွာဒီလိုလမ်းလျှောက်ခဲ့တာပဲ
ကျွန်မအကြောင်းကို7ရက်ပေါင်းသွားလျှင်ကျွန်မအကြီးအကျယ်စိတ်ကျရောဂါနှင့်အထီးကျန်ခံစားရရန်စတင်
ငါ့လက်ရုံးနှင့်ခြေထောက်အာရုံကြောကနေ -tingling အာရုံ
ခြုံငုံစိတ်လှုပ်ရှားမှု -desensitized ပိုစက်ရုပ်တုံ့ပြန်မှုငါပုံမှန်အားဖြင့်အလိုတခုတည်းသောအရာတို့ကိုခံစားပျော်မွေ့ကြဘူး
-less စွမ်းအင်, ဘာမှလုပ်ဖို့အဘယ်သူမျှမလှုံ့ဆျောမှု
porn မှ FAP မှဖွတတ်ပြီး, ငါစဉ်းစားအားလုံးအများကြီးပိုမြင့်ရဲ့နေသည်
သငျသညျဖြစ်ကောင်း porn စွဲကြဘူး။ အကြှနျုပျ၏ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောခဲ့ကြသည်။ ပဲ FAP porn မှယောက်ျားတွေ၏တစ်ဦးကအများကြီးအလွန်အကျွံ။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကအမှန်တကယ်စွဲမဟုတ်ပါဘူး။
ငါခံစားနေရတာ, ပျို့ချင်, မျက်စိထဲမှာ floaters, စိတ်ကျရောဂါ, လှုံ့ဆျောမှုမရှိခြင်း။ ငါသည်လည်းလုံး ၀ ဆက်စပ်မှုမရှိသော candida ကိုတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရသည်။ ထို့ကြောင့်ငါသည်အမှန်တကယ်ဆေးကုသမှုခံယူသည့်ရောဂါလက္ခဏာများကိုပိုင်းခြားသိမြင်ရန်ခက်ခဲနေသည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ နို ၀ င်ဘာလ၊ ကျွန်ုပ်သည် porn, fantasy အားလုံးကိုဖြတ်ခဲ့ပြီးလိင်နှင့်နေ့စဉ် M အကြောင်းစဉ်းစားမိသည်။ သို့သော်ရှည်လျားသောလမ်းကြောင်းကိုဖြတ်ကျော်ပြီးကျွန်တော့်ဇနီးနှင့်လိင်ဆက်ဆံရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ ဒီဇင်ဘာ & ဇန်နဝါရီလကခက်ခဲတဲ့အရာဖြစ်တယ်၊ ကျွန်မမှာအကြီးအကျယ်စိတ်ဓာတ်ကျခဲ့တယ်။ လုံးဝလိင်စိတ်မခံစားခဲ့ရဘူး။ တစ်နေ့လုံးနှင့်တစ်ညလုံးငါ့ ဦး နှောက်ကိုဖြတ်သန်းပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုကလေးတစ်ယောက်လိုငိုနေမိတယ်ဆိုတဲ့အတွေးတွေရှိတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ညစ်ညမ်းသောအလေ့အကျင့်များကြောင့်ဆင်းရဲသားငယ်လေးသည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုအမြဲတမ်းမနှစ်သက်သောသို့မဟုတ်စစ်မှန်သောအမျိုးသမီးများ၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုမရင့်ကျက်သောတန်ဖိုးမဲ့။ အမြဲတမ်းအသုံးမ ၀ င်သောအရာအဖြစ်သို့ပြောင်းစေခဲ့သည်။
ထုတ်ယူခြင်းများသည်အလွန်ဆိုးရွားသည်။ ကျွန်ုပ်၏လေ့လာမှုကိုအာရုံမစိုက်နိုင်သည့်အပြင်အော်ဂဲနစ်ဓာတုဗေဒ၌လည်းဆိုးဆိုးရွားရွားပြုမူခဲ့သည်။ အနိုင်နိုင်ကြောင်းအတန်းထဲတွင် C ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ငါလည်းတချိန်လုံးပင်ပန်းနေပြီ။ ငွေထုတ်ယူခြင်းသည်ရက်ပေါင်း ၃၀ မှ ၄၀ အထိကြာပြီး၊ ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်ရက် ၇၀ မှ ၈၄ ရက်အတွင်းနောက်ထပ်အထပ်တစ်ခုရှိသည်။
[၆ ပတ်ကြာပြီးတဲ့နောက်] ငါအရမ်းနက်ရှိုင်းစွာအိပ်ပျော်နေတယ်မဟုတ်ပေမယ့်လုံ့လရှိသူ၊ လန်းဆန်းမှုခံစားနေရတယ်မဟုတ်ပေမယ့်အိပ်မပျော်တာကိုငါတော်တော်ကြောက်နေပုံရတယ်။ တစ်နာရီလျှင်နာရီပေါင်းများစွာနိုးနေခြင်းထက် ပို၍ ကောင်းသည်။ ငါတပါတ်အတွင်းခေါင်းကိုက်ခြင်းမရှိခဲ့ပါနဲ့ငါရက်သတ္တပတ်၏စုံတွဲတစ်တွဲထက်အများကြီးပိုကောင်းခံစားရတယ်။
1 ။ အစွန်းရောက်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု
2 ။ နာမငြိမ်အိပ်စက်ခြင်း
3. ကြွက်သားကိုက်ခဲခြင်း၊ အဆစ်နာကျင်ခြင်းနှင့်အဖျား (တုပ်ကွေးကဲ့သို့) - နေ့ ၁၅၄ ။
4 ။ အပျော့စားတျရှုပျထှေး
5 ။ ရင်ဘတ် / တင်းကျပ်စွာအသက်ရှူအတွက်တင်းမာမှု
6 ။ စိုးရိမျတ
ငါမသုံးတော့သည့်အချိန်၊ နောက်မှနေ့ခင်းပိုင်းတွင်အအေးမိနေသလားဟုခံစားမိသည်။ (ငါ့မှာ mono ရှိတယ်ထင်နေတယ်။ ) တစ်ခါတလေတော်တော်လေးနိမ့်ကျနေပေမယ့်ငါအဲဒီခံစားချက်ကိုမရတော့ဘူး။ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး၏ပထမခြောက်လတစ်လျှောက်လုံး, ငါပြန်သွားတဲ့အခါတိုင်း,4ရက်အကြာမှာ clockwork ကဲ့သို့ငါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစင်ကြယ်သောငရဲခံစားရလိမ့်မယ်။ ဤရွေ့ကားအဆိုးဆုံးခဲ့ကြသည်ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါ။ ဒါဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခင်းဖြစ်ခဲ့သည်။
1 ။ ကျွန်မအလွန်အမင်း lethargic ရ။
2 ။ အာရုံစူးစိုက်မပေးနိုင်ပါ။
3 ။ အရမ်းရေငတ်ခံစားရနှင့်ရေမျှသောငွေပမာဏကိုငါ့ရေငတ် quenches ။
4 ။ ကျွန်မတယောက်ကိုတယောက်နေရာမှရွေ့လျားစောင့်ရှောက်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနာကျင်မှု, ရှိသည်။
5 ။ ငါအန်၏ပျော့အာရုံခံစားကြရသည်။
6 ။ အကြှနျုပျ၏နှုတျဆိုးအရသာရှိပါတယ်။
7 ။ ငါသူတော်စင်များကဲ့သို့အလွန်ပညာရှိ။ ငါအများကြီးဟောပြောကြ၏။ (ကျနော် porn စွဲလို့ချေါတဲ့အရာကြား၏ဖူးဘူးဆိုပါကကဲ့သို့ပင်)
8 ။ ငါလိင်နှင့်ညစ်ညမ်းအံ့သြစရာဘာကြောင့်ငါ့အစိတျထဲတှငျထူးခြားသောစိတ်ကူးစိတ်သန်းရှိသည်။ (သို့သော်ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်သူတို့ကိုစောင့်ရှောက်)
9 ။ တန်ဆာရှိသမျှတို့ကိုငါအချိန်အိပ်ချင်ခံစားရတယ်။
Day3- အလွန်မျှော်လင့်ချက်မရှိ။ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ အိပ်မပျော်ခြင်း၊ အစာစားချင်စိတ်ပျောက်ခြင်း၊ အလွန်ရေငတ်ခြင်း၊
ငါဆေးလိပ်ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါငါတစ်နေ့ 20 မှီတိုငျအောငျအနညျးငယျအပြားခံစားမိပြီးတော့ကျနော်ပြင်းထန်ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေတယ်။ ကိုက်ခဲခြင်းနှင့်ဝဒေနာ, စိုးရိမ်စိတ်, စိတ်ပျက်အားငယ်, အိပ်မပျော်, လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှု, နက်ရှိုင်းသောစိတ်ဓာတ်, ပင်ပန်းနွမ်းနယ်စသည်တို့ကိုထိုအခါငါငါမလိင်စိတ်မရှိ drive ကိုနှင့်မျှမလှုံ့ဆျောမှုရှိသည်ဘယ်မှာနေ့က 40 မှီတိုင်အောင်နေ့ရက်ကို 55 မှာပြားချပ်ချပ် feeling ကိုစတင်ပါ။ 55 ရက်အကြာမှာငါတကယ်ကောင်းသော feeling ကိုစတင်ပါ။2ပတ်အခြား mini ကိုရုပ်သိမ်းရေးနှင့် flatline ကောင်းသောခံစားပြီးနောက်ငါ့ကိုနှိပ်ပါ။ ငါအကြီးအကျယ်ဦးနှောက်မြူနှင့်အတူတုပ်ကွေးရှိခြင်းခံခဲ့ရတူသောအခုတော့ခံစားရ၏။ ထိုနောက်ငါပိုကောင်းတဲ့နောက်တဖန် feeling ကိုစတငျရ။ ငါပျော်ရွှင်သရုပ်ြပများနှင့်လှုံ့ဆော် feeling, တဖန် socializing ခံစားရန်စတင်ပါ။ ထိုအခါအခြား mini ကိုရုပ်သိမ်း / flatline နောက်တဖန်ငါ့တာမျိုး။ ဒါဟာသံသရာအတွက်ဤကဲ့သို့သောတတ်၏။ ငါအနာကိုငြိမ်းစေ 100% ခံစား၏ပြတင်းပေါက်ရှိသည်နှင့်ပြီးတော့ဆုတ်ခွာနောက်ထပ်လှိုင်းလုံးနောက်တဖန်ငါ့တာမျိုး။ တစ်ခုချင်းစီကိုရုပ်သိမ်းလှိုင်းနောက်မှငါပိုပြီးပြန်ငါ၏အဟောင်းများကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုမှခံစားရရန်စတင်ပါ။
FAP ထုတ်ယူခြင်းသည်ကျွန်ုပ်ဘဝတွင်ခံစားခဲ့ရသောမနှစ်မြို့ဖွယ်အကောင်းဆုံးအရာများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တစ်နေ့ကျော်အနည်းငယ်မျှသာခံစားခဲ့ရသည်။ ဒီအရာက amphetamine, Xanax ခံစားခဲ့ရတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့ငါ့ဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးငါဆေးသောက်ခဲ့ဖူးတဲ့စိတ်ကျဆေးတွေကိုနို့ဖြတ်လိုက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တာပါ။ အခုငါဖြတ်သန်းနေတဲ့ငါအဆိုးဆုံးရန်သူကိုတောင်ငရဲမငိုဘူး။
ငါ၌အားကောင်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ထွက်လက္ခဏာများရှိသည်။ ငါအိပ်ယာထဲမှာငါ့အချိန်အားလုံးကိုဖြုန်းတီးခဲ့လို့ငါတောင်မှပြန်ကျန်းမာလာတယ်။ တိုက်တွန်းချက်တွေကအရမ်းပြင်းလွန်းလို့ကျွန်တော်မခံရပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုမှာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောအပြောင်းအလဲများရှိခဲ့သည်။ https://www.yourbrainonporn.com/rebooting-accounts/rebooting-accounts-page-2/age-30-ed-extreme-fetishes-in-the-past-sex-is-now-great-with-my- ရည်းစား /
Day6- ကျွန်ုပ်၏လိင်တံနှင့် ပတ်သက်၍ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့လာတွေ့ရှိချက်များ၊ ငါ၏အ Streak စတင်ကတည်းကငါတစ် ဦး အပြည့်အဝစိုက်ထူ, နံနက်သစ်သားမရှိ, ဒါကြောင့် (အအေးအခါသို့မဟုတ်သင်ရေချိုးခန်းထဲကထွက်ရသည့်အခါကဲ့သို့) သေးငယ်ကြည့်ရှုသည်။
နီကိုတင်းမှသည်အရက်နှင့်အခြားအရာ ၀ တ္ထုများ - ကျွန်ုပ်ဘဝတွင်စွဲလမ်းမှုအနည်းငယ်ကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ သူတို့ကိုငါကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ပြီ၊ အဲဒါကအခက်ခဲဆုံးပဲ။ မျှော်လင့်ချက်မဲ့မှု၊ အရူးအတွေးများ၊ အိပ်မပျော်မှု၊ မျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့မှု၊ စိတ်ပျက်အားငယ်မှု၊ တန်ဖိုးမဲ့မှုနှင့်အခြားဆိုးကျိုးများစွာသည်ဤ P နှင့် M အရာနှင့်ကျွန်ုပ်ဖြတ်သန်းခဲ့ရသည့်အရာများ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ဒါဟာကျွန်တော့်ဘ ၀ မှာဘယ်တော့မှပြန်ပြီးရင်ဆိုင်ရတော့မှာမဟုတ်ဘူး။
ဒီနေ့ငါ့အတွက်နေ့ ၁၀ နေ့ပါပဲ။ 'နာကျင်နေသည့်ဘောလုံး' များပပျောက်သွားပြီး၎င်းသည်အနည်းငယ်စိတ်ရှုပ်စရာဖြစ်သောကြောင့်ကြိုဆိုသည်။
ဤရွေ့ကားဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာတွေနေ့တိုင်းပိုပြီးပြင်းထန်လာနေကြသည်။ ကျွန်တော့်မှာ ၆ လအတွင်း“ ကောင်းသော” နေ့မရှိခဲ့ပါ။ - အလွန်အမင်းပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု - စိုးရိမ်ပူပန်မှု - ခက်ခဲမှုအိပ်ပျော်ခြင်း - ခက်ခဲမှုအာရုံစူးစိုက်မှု - စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း - ဟက်ဒတ်ခ်ျ - စီးပွါးရေးသုတ်သင်ခြင်း - လုံးဝလုံးဝလွတ်လပ်မှုမရှိခြင်း - မျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့ခြင်း - ဘဝမှပျော်ရွှင်မှုမရှိခြင်း၊ - ယေဘုယျအားဖြင့်ဖုတ်ကောင်ကဲ့သို့ခံစားရသည်
ထုတ်ယူ။ gosh ငါ၏အရပါ။ ငါ၏အဟောင်းများကိုအပြုအမူ (ရမ္မက်), အစွန်းရောက်ယားယံခြင်း, အိပ်စက်မှုလျော့ကျ, လှုံ့ဆော်မှု, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုပ်ကွေးကဲ့သို့ရောဂါလက္ခဏာ, အပြာဘောလုံး, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပျက်, စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း, dysphoria, ဘာမှပေမယ့်လိင်အတွက်အကျိုးစီးပွားအရှုံး, စိတ်ပျက်အားလျော့ပေမယ့်ကဲ့သို့အဘယ်သူမျှမသတ်သေအတွေးများကိုပြန်လည်စတင်ဖို့ထင်ရသောမထိန်းချုပ်အလိုဆန္ဒ ငါရှိသည်ဖို့အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးရက်သတ္တပတ်ငရဲခဲ့သည်။ ကပိုဆိုးတယ်သည်အထိဒုတိယအပတ်ကပြီးတော့စီမံခန့်ခွဲခဲ့ကြရာတပတ်သုံးကနေတစ်နည်းနည်းပိုကောင်းသလိုပဲ။ ကိုယ့်ဆုတ်ခွာနာကျင်မှုကိုချစ်ကြောင်းအရှိဆုံးအသိကိုဖန်ဆင်းမှတဆင့်တွန်းအားပေးရန်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
၂ ပတ်လောက်နေရင်းကရှောင်ကြဉ်တာကိုငါတွေ့ခဲ့ရရင်၊ ငါပုံမှန်အတိုင်းထက်ပိုပြီးမသောက်ခဲ့ဘူး၊ ငါကကဖိန်းဓာတ်အလွန်အကျွံသောက်သုံးသူမဟုတ်။ ကျွန်ုပ်သည်ရေချိုးခန်းသို့သွားရန်ကျွန်ုပ်ညအချိန်တွင်အိပ်ရာမှနိုးထပြီးအိပ်မပျော်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုတကယ်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေပါသည်။
(နေ့ ၂၂) လွန်ခဲ့သောတစ်ပတ်ခန့်ကကျွန်ုပ်၏ဆီး၌စော်ဘွားကြီးအချို့သတိပြုမိသည်။ ဒီမှာအခြားသူတွေကဒီအကြောင်းပြောတာကိုငါတွေ့ခဲ့ရတယ်။
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ် PMO အခမဲ့ဖြစ်ချိန် မှစ၍ (၄၈) ပတ် (၂၈ ရက်) ကြာပြီ။ ငါတုပ်ကွေးကဲ့သို့သောလက္ခဏာတွေပျောက်ကွယ်သွားပြီဝမ်းသာပါတယ် ကျွန်တော်ရေချိုးခန်းကိုခပ်သွက်သွက်ခပ်သုတ်သုတ်သုတ်သင်နေရသည်။ ငါအခုအချိန်မှာအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့တစ်ခုတည်းသောအရာကငါအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မအိပ်တဲ့အခါအိပ်ပျော်နေတဲ့ပြandနာတွေနဲ့အိပ်ပျော်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါပဲ။
(နေ့ ၁၂) အဲဒါကငါ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကထွက်ချင်တဲ့တင်းမာမှုတချို့လိုပဲ။ ကျွန်တော့်ပခုံး၊ လည်ပင်းနဲ့နောက်ကျောကအရမ်းကိုနာနေတယ်။ နာကျင်လွန်းလို့နာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့ရတယ်။ ဒီနာကျင်မှုအချို့ဟာငါ့ ဦး နှောက်ထဲမှာဖြစ်တယ်လို့ငါသံသယရှိတယ်။ ငါတောင့်တင်းတယ်၊ ပြီးခဲ့တဲ့ ၃ ရက်ကဒီလိုခံစားခဲ့ရတယ်။
ပထမရက်ပေါင်း ၅၀ ကငါစလုပ်တုန်းကလိုပဲမြည်းလိုခံစားခဲ့ရတယ်၊ မြည်းနဲ့တူတယ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂရုမစိုက်၊ မစား၊ ပျင်းရိ၊ သို့သော်နေ့ ၅၀ တွင်အားလုံးပြောင်းလဲသွားသည်။ ကျွန်ုပ်၏လက်ရှိရောဂါလက္ခဏာများမှာ - မြင့်မားသောစွမ်းအင်၊ ၄ နာရီအိပ်စက်ခြင်းသာလိုအပ်သည် (လွန်ခဲ့သောညကအိပ်မောကျပြီးအိပ်မောကျနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ) - စိတ်လှုပ်ရှားမှုများပြန်လာနေပြီ - သွေးသည်ခန္ဓာကိုယ်မှတုန်ခါနေသည်။ အားကစားခန်းမထဲ၌) ငြိမ်းချမ်းမှုရှိခြင်း (လိင်နှင့်ပတ်သက်ပြီးစိတ်မ ၀ င်စားသေးပါ) - ၁၀ နှစ်ငယ်သောလူငယ်များ (အခြားသူများပြောသည့်အတိုင်း) - အရေပြားချောချောမွေ့မွေ့တက်ကြွခြင်း၊ ခြေသည်းလက်သည်းများလျင်မြန်စွာကြီးထွားလာသည်။ အသံက ပို၍ ညွှန်ကြားသည်။ စကားများသောပြက်လုံးများကယနေ့ကျွန်ုပ်ကိုရယ်မောစေနိုင်သည်။ —Life's Good and Getting Better
သင်တစ် ဦး flatline hit ဖူးလား သင်ဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာများရှိပါသလား ဟုတ်ပါတယ်, ရက်ပေါင်း 58-87 အကြားကအလွန်အကြမ်းဖက်ခဲ့ပါတယ်နှင့်ပြန်မရရန်ခဲယဉ်းခဲ့ပါတယ်။ ပြင်းထန်သောစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ အိပ်စက်ခြင်း၊ အသံနိမ့်ခြင်း၊ လူမှုရေးနှင့်ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ခြင်းတို့ဖြစ်ပွားသည်။ ငါအများကြီးကူညီပေးခဲ့သည့် Xanax ကိုငါယူပြီးတစ်ပတ်တစ်ကြိမ်ကုထုံးဆရာတစ်ယောက်နှင့်တွေ့သည်။ အခုအဆင်ပြေသွားပြီ။ ငါအရင်ကထက်ပိုပျော်တယ်၊ ပေါင်းသင်းနိုင်တယ်၊ ပိုကောင်းတဲ့အသံရှိတယ်၊ အကောင်းမြင်တယ်၊ ထွန်းလင်းတောက်ပတယ်။
Terrible ခါနီးပျက်စီးခြင်း၏ခံစားချက်, အာရုံစူးစိုက်ခြင်းနှင့်အာရုံစူးစိုက်ရန်ခက်ခဲ, ပြိုင်ကားအတှေး, အိပ်မပျော်, အကူအညီမဲ့ feeling: စိုးရိမ်စိတ်အဆိုးဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ တချို့ကစိတ်ကျရောဂါအမျိုးအစားပစ္စည်းပစ္စယ: ငါကူကယ်ရာမဲ့ feeling, စာလုံးပေါင်းငို, နေကြလို့ပဲဖြစ်တည်မှုအတှေး, ရန်အသုံးပြုလှုပ်ရှားမှုများခံစားဘဲ, ဘယ်လောက်အစဉ်အမြဲငါ PMO မပါဘဲပျော်ရွှင်ပါလိမ့်မည်မေးမြန်း။
ညစ်ညမ်းတဲ့ပြproblemနာမရှိဘူး၊ အကျိုးကျေးဇူးတွေကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ငါထင်ခဲ့တယ်၊ မင်းမှာစွဲလမ်းမရှိဘူးလို့သင်ထင်ရင်၊ လှုပ်ရှားမှုကိုရပ်တန့်ပြီးဘာတွေဖြစ်နေလဲကြည့်ပါ။ ငါ့အမှု၌, အတော်လေးအပြစ်ပေးဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေကာလ။ ငါစွဲလမ်းသောပစ္စည်းဥစ္စာကနေအအေးကြက်ဆင်စိတ်ကူးဘယ်လို။ ဒါဟာအနည်းဆုံးတစ်လကြာခဲ့သည်။ တစ်ခုခုကကျွန်မကိုအာရုံကြောဓာတုဗေဒဆိုင်ရာကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်စေခဲ့တယ်ဆိုတာကို ၂၄ နာရီအတွင်းမှာငါတုန်ခါနေပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုတစ်ခုကြုံတွေ့ရမှာပါ။ ဒါဟာကိုယ့်ကိုကိုယ်နှင့်ပတ်သက်။ သိသိသာသာပိုကောင်းတဲ့ခံစားမှုစတင်ခဲ့ပြီး၊ လူတွေဟာကျွန်တော့်ကိုပိုပြီးကြည်ညိုလေးစားပုံရတယ်၊ ငါ့ရဲ့ဘာသာစကားဟာတိုးတက်လာတယ်၊ ငါဟာအလုပ်မှာပိုပြီးစပြီးစပြောခဲ့တယ်၊
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီဟာကပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာပါ။ စွဲလမ်းသူနှစ်မျိုးရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်။ စူးစမ်းလိုစိတ်ကြောင့်ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ကိုကြည့်ပြီးညစ်ပတ်လာသည်။ သူတို့ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ဖို့အချိန်နည်းသွားနိုင်တယ်။ ငါသူတို့၏ပုံပြင်များကိုဖတ်ရှုသောအခါနှစ်ပတ်အတွင်းတွင်သူတို့သည်တကယ့်တိုးတက်မှုများပြုလုပ်နေသည်ကိုကျွန်ုပ်အလွန်စိတ်ပျက်မိသည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသေကြောင်းကြံစည်မှုကာလနှင့်အခြားတစ်ဖက်သို့ဖြည်းဖြည်းချင်းရောက်ရှိရန်စိတ်ဓာတ်ကျမှုအပြည့်အ ၀ ရရှိနေသည်။ အခြားစွဲလမ်းသူ (ငါဒီအမျိုးအစားတွင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတံဆိပ်ကပ်လိမ့်မည်) သည်ပြissuesနာများကိုပထမ ဦး ဆုံးအနေနှင့်ကြုံတွေ့ရပြီး၊ ပုံမှန်စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်မရှိသောကြောင့်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်အတူသူတို့၏ကြီးထွားလာသောစိုးရိမ်စိတ်ကို“ ဆေးကုသခြင်း” စတင်ခဲ့သည်။
ငါတို့အတွက်တော့ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ဖို့ပိုခက်တယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့ကပြန်မရတော့လို့ပဲ။ ငါတို့ဘ ၀ တွေအတွက်ပထမဆုံး IT ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုပဲ! ဒါကြောင့်ငါတို့ခရီးစဉ်မှာ porn နဲ့ orgasms တွေသာမကငါတို့ထွက်ခွာသွားရမယ်၊ သူတို့ဟာအကြောင်းပြချက်မဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ရမယ့်နက်ရှိုင်းတဲ့ပconflictsိပက္ခတွေရဲ့အကျိုးဆက်တွေပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်အော်ဂဇင်ပြုလုပ်ခြင်းကိုဆက်လုပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုမည်သည့်အခါမျှဖယ်ရှားပေးနိုင်မည်မဟုတ်သကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုနည်းသစ်နှင့်ကျန်းမာစွာဖြင့်နေထိုင်ရန်မည်သည့်ကိရိယာကိုမျှရရှိမည်မဟုတ်ပါ။
ဒါကြောင့်အဲဒီမှာရှိတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော့်အကြံဥာဏ်ကခင်ဗျားရဲ့တိုးတက်မှုကိုတခြားသူတွေနဲ့မနှိုင်းယှဉ်ပါနဲ့၊ မင်းရဲ့တိုးတက်မှုကိုအပတ်စဉ်တိုင်းတောင်မှတောင်မစစ်ဆေးဘူး။ လပေါင်းများစွာကြာနိုင်ပါတယ် ညစ်ညမ်းမှုကိုဖြတ်ခြင်းဖြင့်သင်၏ပြproblemsနာအားလုံးကိုဖြေရှင်းနိုင်မည့်တစ်ခုတည်းသောမှော်ကျည်ဆန်တစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုမထင်ပါနှင့်။ သင်ကန ဦး ထင်ထားသည့်အတိုင်းထက် ပို၍ သိုမှီးနိုင်သည်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရှောင်ရှားပါ၊ အာရုံခံစားမှုတစ်ခုတည်းသို့သာရောက်လျှင်သင်၏ကာကွယ်မှုကိုလျှော့ချပြီးသင့်ကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုပြန်လည်ရယူခြင်းသည် ဦး နှောက်၏နောက်ထပ်လှည့်ကွက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော့်ကိုအများဆုံးအထောက်အကူပြုတဲ့အရာကလူကောင်းသစ်တွေ၊ ကျောင်းသားတွေရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့တွေ့ဆုံခြင်းပဲ။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုတွင်သာမကသင်၏မိတ်ဆွေများ၊ မိသားစုနှင့်သင်ကိုချစ်သူများအပေါ်မှီခိုအားထားပါ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်လူတိုင်းတွင်မဟုတ်ဘဲနေရာတိုင်းတွင်ဖြစ်သည်။
ငါ fapping မဟုတ်စတင်2days ago။ ငါနှင့်အတူလိုက်ရန်ဆုံးဖြတ် ညနေ-Mode ကို။ ငါတီးမှုတ်သည့်အခါတိုင်း porn ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် hentai manga ကိုဖတ်ရှုခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။ အခုငါပုံမှန်ခေါ်တဲ့ဒီပုံမှန် manga ကိုဖတ်နေတယ် “ Kami-sama no Iuutori” ပြီးတော့ဒီမိန်းကလေးရှိတယ် Shouko ငါအဘို့အ hots ရှိသည်သော manga ၌တည်၏။ သူမနောက်တဖန်သန့်ရှင်းသော shit ကိုပြန်တွေ့ခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်း၌ဤထူးဆန်းသည့်ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပျက်နေသည်။ ငါ့ခြေထောက်တွေကမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတယ်၊ ​​ငါခြေထောက်တွေကိုကြမ်းပြင်ပေါ်မှာနင်းနေတယ်၊ ​​ဆံပင်ထဲက shit ကိုဆွဲထုတ်ပြီး“ ငါလုပ်ချင်တယ်။ ငါအရမ်းမကောင်းဘူးတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေချင်တယ်!” အများအားဖြင့်ငါကအေးဆေးတည်ငြိမ်ပြီးစိတ်ရှည်တတ်တယ်။ ဒီဝုန်းဒိုင်းကြဲငါ့အတွက်ပုံမှန်မဟုတ်ဘူး
ငါ၌ porn နှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုစွဲလမ်းသည်ကိုမသိခဲ့ပါ။ ငါ "ကောင်းပြီ, ကကျော်လွတ်လပ်စွာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ငါအချိန်မရွေးဆေးလိပ်ဖြတ်နိုင်မယ်ဆိုတာသေချာတယ်။ ” ဒါပေမယ့်ဒါကသက်သေပြရုံပဲ။ ငါက 2D ဒါမှမဟုတ် 3D porn ပဲစွဲတယ်။ ငါ့ရည်းစားကနောက်ထပ် ၁ လပြန်မလာသေးဘူး။ ငါအရမ်းဆိုးနေတာပဲ။
PS ယခုဤ url လိပ်စာပေါ်ရှိ“ Enter” ကိုနှိပ်ပါ။ ကျွန်တော်မဖိသေးဘူး ငါရုံယခုမဆို freakin '' အချိန်လုပ်လိမ့်မယ်။ ဒါဟာ SOOO ယာယီဖြစ်ပါတယ်။
အသက် ၂၅ နှစ် - ED နှင့်အခြားပြproblemsနာများစွာ။ ပြင်းထန်သောဆုတ်ခွာလက္ခဏာများ
တူသော porn ဆုတ်ခွာဘာ
ငါဒီ site အသစ်ဖြစ်၏။ အကြှနျုပျ၏ရည်မှန်းချက် porn အရှုံးမပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်ဒီမှာအခွားသူမြားစှာ porn ၏စွဲသဘောပေါက်ခဲ့ကြပြီးဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေကြသူအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူပထမမျိုးဆက်အကြားဖြစ်စေခြင်းငှါသတိပြုမိပါ၏။ ငါသည်လည်းထိုသို့ဆိုသောကြောင့်မယ့်အစားဦးနှောက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြိုနိုင်ငံခြားဓာတုပစ္စည်းတစ်ခုကိုဖြိုဖြစ်ကြောင်းသဘာဝကလိင်ဓာတုပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်အရက်သို့မဟုတ်ဆေးရွက်ကြီးထက် porn ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ခက်ခဲဖြစ်မည်အကြောင်းနားလည်ပါသည်။ porn တက်ပေးခြင်းတစ်ဦးလမ်းအတွက်သင့်ရဲ့သဘာဝကလိင်ဗီဇအတိုင်းအတူစစ်တိုက်ကဲ့သို့ဖြစ်၏။
ငါ 17 နှစ်များအတွက်ညစ်ညမ်းသို့ခဲ့သညျ။ ငါမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အရက်အစားသန့်စင်အခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ်ရှုမြင်လေ့ရှိတယ်, ငါဆန္ဒရှိသို့မဟုတ်စိတ်ဝင်စားမှုကိုဆုံးရှုံးလျှင်ငါချက်ချင်းဆေးလိပ်ဖြတ်နိုင်တယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်။ ငါမှားသွားတယ်။ လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်အတွင်းဆေးသောက်ခြင်းနှင့်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းတို့သည်လူများသည်တဖြည်းဖြည်းနှင့်တဖြည်းဖြည်းပျောက်ကွယ်သွားပုံနှင့်တူသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာဖြစ်ပေါ်နေသောအခြားအဓိကဘဝပြောင်းလဲမှုများနှင့်အတူ porn နှင့်အတူအအေးကြက်ဆင်သွားအတူတကွဖြစ်ပေါ်အပြောင်းအလဲများလည်းမယ်လို့ခံစားရတယ်။
လျှော့ချမှုသည်ဖြောင့်တန်းသွားခြင်းမရှိသော်လည်းလွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်အတွင်းသိသိသာသာကျဆင်းခဲ့သည်။ ငါလျှော့ချရေးအတွက်အဆင့်သုံးဆင့်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ ပထမ ဦး စွာငါအွန်လိုင်းတဖြည်းဖြည်းအမျိုးသမီးများနှင့်အတူစကားပြောခြင်းကိုတဖြည်းဖြည်း။ ဒုတိယအချက်အနေဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်သည်ညစ်ညမ်းသောဗီဒီယိုများနှင့်အမျိုးသမီးများ၏ဓါတ်ပုံများကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းစပြီးကြည့်တော့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအဆင့်ကိုလျှော့ချသောတတိယအဆင့်တွင်လောလောဆယ်ကျွန်ုပ်ရှိနေသည်။ ကျွန်ုပ်၏အန္တိမရည်မှန်းချက်မှာကျွန်ုပ်၏ညစ်ညမ်းရုပ်ကိုအသုံးပြုခြင်းကိုဖယ်ရှားရန်သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးဖြစ်စေရန်ဖြစ်သည်။
ဒါဟာချောမွေ့စီးနင်းခဲ့ခြင်းမရှိပေ။ ငါလျှော့ချရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ရံဖန်ရံခါ relapses ရှိခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တော့ကြောင့်ထိုကဲ့သို့သော (ကျနော်လက်ရှိအခြားအလုပ်ကိုရှာနေပါတယ်) အလုပ်မှာငါ့အကြီးကြပ်ရေးမှူးအများအပြားနဲ့အတူရတဲ့မအချက်တွေ, ထိုကဲ့သို့သောအစားအစာနှင့်ငှားအဖြစ်ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ, ကိုယ့်ကိုမကြာသေးမီကအကျဉ်းချုပ်ကတော့ porn ပါ pic နှင့်ဗီဒီယိုမြင်ကွင်းသို့ပြန်ရောက်သွားတယ်ခဲ့သည်။ အစဉ်မပြတ်ငါထိုကဲ့သို့သောဖြစ်ရပ်များသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအဖြစ်ဆိုးပြောင်းလဲနေတဲ့ဘဝအဖြစ်အချက်တွေကြောင့်ငါ့အသက်ကို၏ကျန်ရှိသောများအတွက် relapses များအတွက်အလားအလာရှိလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
ငါကလျှော့ချအချိန်သိသိသာသာငွေပမာဏကိုသုံးစွဲပြီးနောက် porn ငါ၏အသုံးပြုမှုကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ကြိုးစားနေပါတယ်။ ငါ၏အလျော့ချရေးစဉ်အတွင်းကျနော်အောက်ပါရောဂါလက္ခဏာများကြုံတွေ့:
ဖြစ်နိုင်သည် OCD အလားတူဖြစ်ကြောင်းခံစားချက်တွေကိုနှင့်စိုးရိမ်မှုတွေ
ငါရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူအမျိုးသမီးတွေကုသယုံကြည်ပါတယ်။ အဘယ်သို့ငါ porn အတွက်ပုံဖော်နေသည်ကတကကမ်ဘာပျေါတှငျဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုမပေးကြောင်းကိုငါသိ၏။ ငါသည်လည်း porn တက်ပေးခြင်း၏လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုချင်းစီကိုလူတစ်ဦးများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသည်ကိုငါသိ၏။ နညျးလမျးမြားစှာတှငျငါညစ်ညမ်းသည့်အရက်အလားတူဦးနှောက်, ဆေးရွက်ကြီးနှင့်အခြို့သောမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ဒေသများတွင်သာသက်ရောက်သည်ကိုကျနော်နားလည်ပါတယ်။ porn ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေစဉ်အခြားမည်သူမဆိုထိုအလက္ခဏာတွေတွေ့ကြုံခဲ့ဖူးပါသလား
ငါသည်သင်တို့၏စာရင်းထဲတွင် 1 မှတဆင့်တိုင်းကို item7၏ tick နိုင်ပါတယ်။ စိုးရိမ်ကြောက်ရွံ့တစ်ဦးကအကြီးအကျယ်တိုးနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ခက်ခဲအကြမ်းတမ်းဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါကအားလုံးလျှောက်မျက်နှာပြင်အောက်တွင်ရှိခဲ့ကြလိမ့်မယ်သံသယ, ဒါပေမယ့်ငါဒီကန့်သတ်အသိအမြင်ခဲ့ဒါကြောင့်အစဉ်မပြတ်ငါ porn နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနှင့်အတူထွက် numbing ခဲ့သည်။
ငါထုံခဲ့သည်။ ခေါင်းကိုက်ခြင်း။ အိပ်မရနိုင်ပါ။ အစာစားချင်စိတ်ဆုံးရှုံး။ စိုးရိမ်စိတ်။ အာရုံ၏အစွန်းရောက်မရှိခြင်း။ 20-30 နေ့ရက်ကာလအဘို့။ ငါပျော်ရွှင်ဖွယ်ပြန်လည်သိမ်းဆည်းအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။ နောက်တဖန် porn ကိုကြည့်ဖို့စွဲလမ်းဆွဲအများကြီး။
30-90 ရက်ပေါင်းနည်းပါးလာလက္ခဏာတွေခဲ့ကြသည်သို့သော်မကောင်းတဲ့ပျော်ရွှင်ဖွယ်ပြန်လည်သိမ်းဆည်းခဲ့သညျ။ 90 ရက်ပေါင်းသို့မဟုတ်ဒီတော့ပြီးနောက်ဆုတ်ခွာအများကြီးပိုကောင်းခဲ့ပါတယ်။
[၂၆ မီလီမီတာ] ၄ နှစ်အတွင်းကျွန်ုပ်သည် porn ကိုကြည့်ခြင်း၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများမရှိဘဲ ၅ ရက်ကြာသွားခဲ့သည်။ ငါတွေ့ကြုံခဲ့ရသောအစစ်အမှန်ရောဂါလက္ခဏာအချို့ကိုမျှဝေချင်သည်။
ငါဒီမျှဝေဖို့အကောင့်အသစ်တစ်ခုလုပ်လိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းတို့ကမင်းငါ့ကိုငါ့ကိုလှည့်ပတ်ကြည့်နေတာပေါ့၊ ဒါကငါကိုယ်တိုင်တာဝန်ခံဖို့ကောင်းတဲ့နည်းလမ်းပဲ။
ငါ့ကိုတွေ့တဲ့လူအများစုကကျွန်တော့်ကိုပြီးပြည့်စုံတဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့လူတစ်ယောက်ကိုဖော်ပြလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။ ငါ၌ကောလိပ်ဒီဂရီနှင့်မြင့်မားသောလစာရသောအလုပ်ရှိသည်၊ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုလုံးဝမရှိခဲ့ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ပေါင်းပင်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်စီးကရက်သောက်ခြင်းအကြိမ်အရေအတွက်ကိုရေတွက်နိုင်သည်။ မျိုးစုံဆက်ဆံရေးရှိခဲ့တယ်။ ဒီရင်းနှီးတဲ့စွဲလမ်းမှုဟာတစိတ်တပိုင်းအတွက်ငါကျိန်းသေအပြစ်တင်နိုင်တဲ့ရင်းနှီးသောမိတ်ဖွဲ့မှုမရှိပါဘူး။ ဒါကကျိန်းသေငါ့ကလေးဘဝကနေအဓိကအား, ခင်မင်ရင်းနှီးဘယ်လိုတည်ဆောက်ရန်သို့မဟုတ်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူဘယ်တော့မှမ။
ငါ့ကိုတွေ့တဲ့သူတစ်ယောက်မှငါဟာငါနင့်ကိုညစ်ညမ်းရုပ်ဆန်တဲ့စွဲစွဲလမ်းမှုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောသလား။ Nope ။ မျက်နှာပြင်ပေါ်ကလူနှစ်ယောက်ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ကြည့်ရတာခက်တဲ့ဆေးတွေလိုစွဲလမ်းနိုင်တာကိုလူဘယ်နှစ်ယောက်သတိထားမိပါသလဲ။ လူ့အဖွဲ့အစည်းကိုအခြေခံအားဖြင့်ဒီအဆင့်မှာပုံမှန်ဖြစ်အောင်ငါပြောနိုင်တာပဲ။
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နှင့်ပြက်ရယ်ပြုခြင်းကိုလွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကကျွန်တော်သဘောပေါက်မိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ပထမဆုံးအကြိမ်ရှာဖွေတွေ့ရှိကတည်းကအပတ်တိုင်းအနည်းဆုံး ၄ ကြိမ်တစ်ကြိမ်ညစ်ညမ်းခြင်းကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထိုခဏမှာနှိပ်လိုက်ခြင်းတစ်ခုခု ... ငါထင်တယ်သန့်ရှင်းသော shit၊ ငါတကယ်လုပ်ခဲ့တာကြာပြီ၊ ဘယ်တော့မှတောင်မသိခဲ့ဖူးဘူးလား။
သုံးနှစ်ကြာပြီးတဲ့နောက်ငါပထမဆုံးအကြိမ်အနေနဲ့5ရက်အတွင်းထပ်ခါထပ်ခါမလုပ်မိဘဲလုပ်ခဲ့တယ်။ တကယ်တော့လွန်ခဲ့သည့်3နှစ်များတွင်ကျွန်ုပ်သည်3ရက်ပေါင်းများစွာကိုတောင်မှမပြုလုပ်ခဲ့ဖူးပါ။
ပထမ ဦး ဆုံးနေ့မှာ၊ များသောအားဖြင့်ငါဟာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းခြင်းများကြုံတွေ့ရတတ်သည်။ အိပ်ရန်အဆင်မပြေပေမယ့်လုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်နေ့မနက်မှာငါအရမ်းပျော်တယ် နီးပါး? အလုပ်ကနေထွက်ပြီးအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အထိတစ်နေ့လုံးအားပြည့်နေတယ်။ ထို့နောက်စိတ်ဓာတ်ကျလာသည်။ ကျွန်ုပ်စတင်ခံစားလာသည်။ ကျွန်ုပ်မည်သို့ဖော်ပြရန်မသေချာပါ။ ငါ့ ဦး နှောက်သည်ကျွန်ုပ်ဘဝ၏အချိန်ကောင်းများကိုလှုံဆော်ပေးပြီးသူတို့ကိုစောင့်ကြည့်စေခြင်းဖြင့်brainရာမလှိုင်းလုံးကြီးကိုဖြတ်သန်းနေသကဲ့သို့။ Reddit ကိုကြည့်နေစဉ်အတွေးများသည်ကျွန်ုပ်ခေါင်းထဲရောက်သွားသည်။ “ ဒီ NSFW အလုပ် link ကိုသာနှိပ်လိုက်ပါ၊ သင်တွေ့ရမည့်အရာကိုဘယ်တော့မှသိမှာမဟုတ်ဘူး” "သိချင်စိတ်များအတွက်သာ [WORD] ကိုရိုက်ထည့်ပါ၊ ၎င်းတွင် porn ရှိမရှိကြည့်ပါ။ ငါဖုန်းနဲ့လက်တော့ပ်ကိုညဖက်မှာထားခဲ့ပြီးနိုးထဖို့ပုံမှန်နှိုးစက်တစ်ခုထားတယ်။
သုံးရက်မြောက်သောနေ့တွင်ကျွန်ုပ်သတိပေးချက်မပေါ်မီတစ်နာရီအကြာတွင်နိုးသည်။ ဘာလဲကွာ? ကျွန်ုပ်အလွန်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသည်၊ ကျွန်ုပ်၏ရင်ဘတ်တွင် adrenaline ခံစားရနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်အိပ်ရာထဲကနေထွက်လာဖို့ဆန္ဒကိုမခံစားရဘူးလား။ ငါဘာရှာရမှန်းမသိဘူး။ “ အောက်ထပ်ကိုဆင်းပြေးပြီးသင့်ဖုန်းကိုတကယ့်ကိုအမြန်ဆုပ်ကိုင်ပါ၊ ပြီးရင်ပြီးရင်နောက်ထပ်အပိုနာရီအတွင်းအိပ်နိုင်ပါတယ်။ ” အဘယ်သူမျှမ fuck ဆိုတဲ့။ ငါရေချိုးပြီးစောစောစီးစီးအလုပ်လုပ်ဖို့သွားတယ် တစ်နေ့လုံး manic ပါ။ ဂီတကမယုံနိုင်လောက်အောင်အသံ။ ယုံကြည်မှုရှိပါကအသံသည်ပုံမှန်ထက် ပို၍ နက်သည်။ နံနက်ယံ၌အအေးစိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်မည် downing ပေမယ့်သုညစိုးရိမ်ပူပန်မှု။ ထိုညတွင်အိမ်သို့ပြန်ရောက်သည့်အခါတွင်လည်းအလားတူလက္ခဏာများ…လွန်ခဲ့သော ၄ နှစ်ကကျွန်ုပ်ကြုံခဲ့ရသည့်ဆိုးရွားသည့်နေ့ကိုကျပန်းမှတ်မိပြီး၎င်းကိုမစဉ်းစားတော့ပါ။ မိန်းကလေးတွေရဲ့နာမည်ကိုတောင်ဂရုမစိုက်၊ မမှတ်မိဘူးလား? တစ်ညလုံးအအေးမိခြင်း၊ ငါအဖျားရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်။
နောက်နေ့ငါ့နှိုးသံကိုနှိုးပါ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ခံစားရတယ်။ ငါရက်နာလိုရှိသည်လိုပဲ။ တစ်နာရီအပိုအိပ်ပါ၊ တနေ့လုံး shit ကဲ့သို့ခံစားရသည်။ သို့သော်ထိုည၌ပင် pron ကိုစဉ်းစားရန်အလွန်ရှုပ်ထွေးသည်။ ညဘက်တွင်အအေးမိခြင်း။
နေ့ ၅။ နှိုးစက်မတိုင်မီ ၅ မိနစ်ခန့်တွင်ထခဲ့သည်။ ငါထင်ပုံမှန်ခံစားရတယ် ညမတိုင်မီကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂကိုမလေ့ကျင့်လျှင်ကျွန်ုပ်မည်သို့ခံစားရမည်နည်း။ အလုပ်သွားပါ cue စိုးရိမ်စိတ်တိုက်ခိုက်မှု။ မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေရန်ကြံစည်ခြင်း။ အကျင့်ကိုကျင့်။ အဲဒီညမှာသူငယ်ချင်းတွေမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဒီညမှာပဲရှောင်လို့မရတဲ့အထီးကျန်မှုတူညီနေတယ်။ အေးခဲပြန်ချွေးပြန်သည်။
6 ရက်။ ဒီနေ့ ဒီ shit ဘယ်လောက်အန္တရာယ်ကြီးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်မရဲ့နောက်ဆုံးသဘောပေါက်မှုက ပြီးခဲ့သည့်5ရက်များအတွင်းကျွန်ုပ်ခံစားခဲ့ရသောအတက်အကျများနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအရေအတွက်သည်ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်နှစ်အတွင်းခံစားရသောခံစားမှုများထက်ပိုသည်၊ နောက်ပိုင်းတွင်မိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်တွေ့ဆုံရန်အစီအစဉ်ရှိသော်လည်းမိမိကိုယ်ကိုမုန်းတီးမှု၊ အပြစ်ရှိသည်၊ မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေသည့်အတွေးများနှင့်အထီးကျန်မှုအမျိုးမျိုးရောနှောနေရသည်။
လာမယ့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်မှာဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာမသေချာပေမဲ့အဲဒါကိုပြီးအောင်လုပ်ချင်တယ် ဒီ shit ဟာသင့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်စေတယ်ဆိုတာအားလုံးသိစေချင်ပါတယ်
“ ဒါပေမယ့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကသဘာဝပဲ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကဖန်သားပြင်တစ်ခုပဲ၊ ဓာတုပစ္စည်းတွေလည်းမရှိဘူး။ ”
တောင်းပန်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်မရပါဘူး တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်သဘာဝမဟုတ်ပါ ၎င်းသည်အထီးကျန်ခြင်း၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်သည်။ ထိုမျက်နှာပြင်? ဒီပုံရိပ်ကမင်းစိတ်ထဲမှာရှိသလား။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အမှန်တကယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဓာတုဓာတ်ပြုမှုများမှာလား။ ဒီထက်ပိုပြီး၊ အကယ်၍ လေ့လာခဲ့လျှင်သံသယဖြစ်ဖွယ်ရင်းမြစ်များမှအမြဲတမ်းအားပေးခြင်း။
သင်တို့တွင်တစုံတယောက်သောသူသည်ဤအမှုကိုမြင်လျှင်၊ သင်တို့ကိုငါတိုက်တွန်းနှိုးဆော်၏။ မင်းကိုမင်းသိစေချင်တာကမင်းဟာမင်းရဲ့ဘဝနဲ့စိတ်ဓာတ်ရေးရာအတွက်အလွန်တကယ့်အကျိုးဆက်တွေရှိနိုင်တယ်။ ကျွန်ုပ်သည်3နေ့အမှတ်အသားတွင်ကျွန်ုပ်ရေတွက်နိုင်သည်ထက်အကြိမ်များစွာမအောင်မြင်ပါ၊ ကျွန်ုပ်ဤအချိန်ကိုလုပ်နိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
ငါ 26 အသက်အနှစ်ဖြစ်ကြောင်းကို, ဟောင်းတစ်ဦးဘိန်းဖြူစှဲလမျးသူ။ (post မှ Link ကို)
ကျွန်တော်အသက် ၁၅ နှစ်မှာဘိန်းဖြူကိုစတင်သုံးစွဲခဲ့ပြီး ၁၉ နှစ်အရွယ်မှာရော့ခ်အောက်ခြေကိုရောက်သွားပြီး၊ ၄ လကြာပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်မဟာသန့်ရှင်းတဲ့သူလို့သတ်မှတ်ခံရပြီးတစ်ခါတလေတပ်မက်ခဲ့တယ်၊
ဆန့်ကျင်ဘက် - ကျွန်ုပ် ၁၁ နှစ်အရွယ်တွင်ပထမ ဦး ဆုံးအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုတွေ့မြင်ခဲ့ပြီး၊ တူညီသောအသက်အရွယ်၌ပင်ပုပ်စပ်ခြင်းနှင့်စတင်ခဲ့ပြီးယခုတိုင်ကျွန်ုပ်သည်အိပ်မက်မက်သူအမျိုးသမီးနှင့်လက်ထပ်ထားသော်လည်းယနေ့အထိစွဲလမ်းနေဆဲဖြစ်သည်။ Porn နှင့် Fap တို့သည်ကျွန်ုပ်၏အိမ်ထောင်ရေးကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဇနီးနှင့်ကျွန်ုပ်လိင်ဆက်ဆံသည့်အခါကျွန်ုပ်လုံးဝပြီးမြောက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။
ဒီနေရာမှာပို့စ်ရဲ့အသားပဲ။ ငါ NoFap ကို ၆ လလောက်ကြိုးစားနေခဲ့ပြီး ၆ ရက်ကျော်လွန်ပြီးမှတစ်ခါမှမလုပ်ဖူးဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ရက်ကထိတ်လန့်စရာတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကွန်ပျူတာထဲမှာ jizz နဲ့ porn ကစားတာတွေလည်းတွေ့တယ်။ ငါ porn, အ fap session ကိုနှင့်အော်ဂဇင်၏ရှာကြံ၏အဘယ်သူမျှမမှတ်မိသည်။
ဒီလိုမျိုးကျောက်စိမ်းဘိန်းဖြူနဲ့မထိခင်မှာဖြစ်ခဲ့တာ။ ငါမသုံးချင်တော့ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါသုံးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ငါ့ ဦး နှောက်ကထိထိရောက်ရောက်ပိတ်ပြီးနောက် "ပြန်နိုးလာ" လိမ့်မယ်။
ငါအခုအရမ်းကြောက်တယ် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ထုတ်ပြန်ချက်များကိုမုန်းတီးသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ဘိန်းဖြူအပြင်အခြား NoFap ကဲ့သို့သောအရာများကိုတစ်ခါမှမကြုံဖူးပါ။ ဦး နှောက်ဓာတုဗေဒကိုဤစွဲလမ်းမှုသည်ဘိန်းဖြူနှင့်တူညီသည်ဟုဆိုနိုင်ပါသလော။ !
အိပ်မပျော်တဲ့ညလေးညဥ့်အခါမှာကျွန်မဟာလုံးဝယိုစိမ့်နေပါတယ်။ ငါလောင်နေသလိုခံစားရတယ်၊ အဆက်မပြတ်ခေါင်းကိုက်နေတယ်၊ ​​ငါအရမ်းပင်ပန်းလို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး။ အဆိုပါရောဂါလက္ခဏာတွေအမှန်တကယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ငါဤကဲ့သို့သောဘာမှကြုံတွေ့ဘယ်တော့မှ !!! ငါဆေးခြောက်ကိုဖြတ်တဲ့အခါငါအရမ်းခက်ခဲအချိန်, အိပ်ပျော်ခြင်းနှင့်သင်တန်း၏တပ်မက်ခဲ့ပေမယ့်အများကြီးပိုမဟုတ်ပါဘူး။ ဆေးလိပ်သောက်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်သည်တွန်းအားများနှင့်စိတ်တိုစရာများကိုသာပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဒါပေမဲ့မွေ့လျော် !! ဤရွေ့ကားဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာတွေငါစိတ်ကူးနိုင်ဘူးဘယ်တော့မှတစ်ခုခုဖြစ်ပါသည်, ငါအက်တစ်စွဲစွဲပြန်လည်ထူထောင်ကဲ့သို့ငါခံစားရတယ်။ ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ကိုသိသော်လည်းကျွန်ုပ်အတွက်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်မကောင်းသောအရာတစ်ခုလုပ်နေသည်ဟုကျွန်ုပ်ကိုယ်ကပြောနေသကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
ဆုတ်ခွာခြင်းလက္ခဏာများသည်ကျွန်ုပ်၏အလုပ်ကိုပါတက်ကြွစေနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တကယ်ကြောက်သည်။ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကငါဖောက်သည်များနှင့်စိတ်ရှည်ခြင်းနီးပါးမရှိကြောင်းသတိပြုမိပြီး၎င်းတို့ကိုဒေါသထွက်သွားသည်။ ကျွန်ုပ်၏အပြင်းအထန်စိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်အောင်မည်သို့စီမံနိုင်မည်နည်း။ ကျေးဇူးပြု၍ ကူညီပါ၊
ငါ၏အ nofap ခရီး၏ပထမဦးဆုံးရက်အနည်းငယ်အတန်ငယ်အေးနှင့်စိတ်ခံစားမှုခဲ့ကြသည်။ သူတို့တစ်တွေချမ်းသာသူကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏။ ယခုမူကား, ငါ kinda အကြောက်လွန်ရောဂါအစွန်းရောက်စိုးရိမ်ခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါခံစားရငါခေါင်းကိုက်တယ်။ ငါဘယ်တော့မှအစဉ်အဆက်ကိုထပ် PMO ၏လမ်းဆင်းလဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂတိထားသောသကဲ့သို့ငါငါ့အလိုရှိသမျှရမ္မက်တိုက်ခိုက်နေနေပါတယ်။
ငါခံစားချက်တွေလည်းမရှိတော့ဘူးလို့ခံစားရတယ်။ အတိတ်ကအမှားတွေကကျွန်တော့်ကိုခြောက်လှန့်စေတယ်။ ငါစိတ်ပူမိတဲ့အရာတွေဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးဆိုတာငါသိပေမယ့်ငါသူတို့ကိုထပ်ပြီးသက်သာအောင်လုပ်နေတယ်။
ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုဖယ်နေတုန်းပဲ, ငါ၏နေ့စဉ်လုပ်ငန်းများကိုအာရုံစိုက်နှင့်ဤခံစားချက်များကိုနောက်ဆုံးမှာဝေးလည်းညှိုးနွမ်းလိမ့်မည်ဟုကိုယ့်ကိုယ်ကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းနိုင်ပါ၏, ဒါပေမယ့်ငါကဒီကပုံမှန်တစ်ခုခုပါလျှင်သိရန်လိုသည်အခြားတစ်စုံတစ်ဦးကလည်းဒီအတွေ့ကြုံခံစားခဲ့သလဲ, သငျသညျအကြှနျုပျအဘို့အခြို့သောအကြံပေးချက်များတယ်ဘူး ။
Dopamine အလွဲသုံးစားမှု 40 နှစ်ပေါင်း .. အဆိုပါထုတ်ယူအစစ်အမှန်ဖြစ်ကြောင်း
ငါအချိန်မရွေးနုတ်ထွက်နိုင်သည်ဟုထင်ခဲ့သည် .. နှစ်ပေါင်း ၄၀ ကြာသည်တစ်နေ့တာမှအနားယူခြင်းဖြစ်သည်ဟုထင်ခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းသော PMO နေ့စဉ်ကြည့်ခြင်းကို dopamine အလွဲသုံးစားမှုမှဓာတုဗေဒထုတ်ယူမှုသည်အမှန်တကယ်ဖြစ်သည်။ အစပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်၏ prefrontal cortex အလယ်တွင်အနည်းငယ်သောအသံဗလံရှိခဲ့သည်၊ ထို့နောက်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏နှာခေါင်းလမ်းကြောင်းများအထိရောက်သွားသည်။ ၎င်းသည်ညာဘက်နှင့်ဘယ်ဘက်သို့ပြောင်းလဲသွားပြီးတစ်ခါတစ်ရံတွင်လည်းတုန်ခါခဲ့သည်။ အကယ်၍ သင်ယခုဆေးလိပ်ဖြတ်နိုင်လျှင်၊ သင်စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနှင့်အတွေ့အကြုံများဆုံးရှုံးမှုအားလုံးကိုကျော်ဖြတ်ရန်နှင့်ထိုဆုတ်ခွာမှုလက္ခဏာများကိုနောက်ပိုင်းမှသာအမှန်တကယ်မစောင့်ချင်ပါ။ အိုး၊ ငါသေချာတာပေါ့ ဦး နှောက်နေတဲ့နေရာမှာငါတကယ်လုပ်ဖို့လိုအပ်တာကိုအာရုံစိုက်ဖို့ခက်တယ်။
ဤအရာအားလုံးကိုဖြတ်သန်းခြင်းကကျွန်ုပ်ကိုရှေ့သို့ဆက်ရန်လှုံ့ဆော်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤအရာကိုနောက်တဖန်မလုပ်လိုတော့ပါ။ နေ့ ၁၂ နှင့်ရှေ့သို့ရွေ့။ ကောင်းသောနေရာတွင်။
ဒီမှာ 20 နေ့ကတကယ်ခက်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၌စိတ်ဝင်စားမှုရှိနေစဉ်ကျွန်ုပ်ထွက်နေသောအရာများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်၏ dopamine သည်ဘာမျှမထွန်းကားစေနိုင်ပါ။ ညစ်ညမ်းမှုနဲ့အတူငါဟာစိတ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့စားတာ၊ အင်တာနက်ကိုအလွန်အကျွံသုံးစွဲတာစတာတွေကိုဖြတ်လိုက်တယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၌တိကျတဲ့အရာတစ်ခုခုရှိမှသာကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာကိုဖွင့်ပြီး၎င်းသည်ပြီးမြောက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာကိုတစ်နေ့တာလုံးပိတ်ထားပါလိမ့်မည်။
ငါကိုယ်တိုင်ဒီနာကျင်မှုဝေဒနာကိုလုံးဝခံစားခွင့်ပေးတယ် ငါပျင်းခြင်း၊ စိတ်ပျက်ခြင်း၊ စိုးရိမ်ခြင်း၊ အထီးကျန်ခြင်း၊ အမျက်ထွက်ခြင်း၊ ဤအရာများကိုကျွန်ုပ်များစွာဆင်ခြင်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်အစားအစာများ၊ ညစ်ညမ်းမှုများနှင့် Reddit တွင်တစ်နေကုန်ထိုင်စားခြင်းထက်ဤခံစားချက်များကိုခံစားရရန်နှင့်ကိုင်တွယ်ရန်သင်ယူခြင်းသည်ကြီးမားသောအကျိုးကျေးဇူးဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။
ဒါကတချို့ပြင်းထန်သောဆုတ်ခွာတူသောအသံ။ ငါ ၆ ရက်ဝန်းကျင်တစ်ချိန်ချိန်မှာငါ့အတွက်တော်တော်ဆိုးသွားတယ်။ ဒါပေမယ့်အဓိကအားဖြင့်ငါခံစားရတာကတော့ dopamine အရေးကြီးတဲ့အရင်းအမြစ်တစ်ခုပျောက်နေသလိုပဲ၊ ငါ့ခေါင်းထဲမှာဒီအချည်းနှီးသောအာရုံခံစားမှုဖြစ်တယ်။ ထို့အပြင်စိတ်ဓာတ်ကျစေသည်။ ဆက်လုပ်ဖို့ဘယ်လိုခံစားရလဲမသိဘူး…ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော့်အရှည်ဆုံးက ၉ ရက်ပေါ့။ Kinda ကရိုးရိုးသားသားပြောရရင်တော့ကြာကြာမခံချင်ဘူး
အရက်, ကင်းနှင့်ဘိန်းဖြူ Withdrawal လက္ခဏာများ
dopamine နဲ့ acetylcholine - - အိပ်စက်ခြင်းမမှန််ပတ်သက်နေမည်အကြောင်းအမေရိကန်သုတေသီများနှစ်ခု neurotransmitters ၏အနိမ့်အဆင့်ဆင့်အစီရင်ခံပါပြီ။